Lahaanshaha Forex | FXCC
Warbixinta Warbixinta Koontada
Warbixinta xisaabtanka xisaabtanka FXCC waxay muujineysaa dhammaan muwaadiniinta lagu sameeyay koonto ganacsi wakhti go'an. Tusaale ahaan; Dhamaan ganacsadaha (amar) macmiilku wuxuu galaa suuqa, qiimaha amar kasta, dheelitirka xisaabta wakhtiga gaar ah iyo isku dheelitirka dhejinta ka dib ficil kasta ee xisaabta waxaa lagu xisaabiyaa.
Qiimaha hadda ee koontada macmiilka, tan waxaa ka mid ah macaamiisha xisaabtanka (qaddarka lacagta saafiga ah ee lagu keydiyay / ku haray xisaabta) iyo isbeddel kasta oo sababay: faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka laga helo boosaska hadda jira iyo kuwa la xiray, laga bilaabo dhaqdhaqaaqa sida: komishannada, khidmooyinka wareejinta, ama khidmadaha la xariira bangiga, haddii khidmadaha noocan oo kale ah la cadeeyo.
Sarrifka sicirka sarrifka ee lagu ansixiyey bangiyada dhexe Lacagta qaranku waa "lakin" (oo la goostay) oo ah lacag weyn (lacag xoog badan, sida Doolarka Maraykanka ama Euro). Tusaale ahaan ugu dambeeyay oo ah jaangooyada Faransiiska Swiss ee euro. Peg waa la isku-hagaajin karaa, guud ahaan sida hagaajinta booska tartanka ee tartanka dalka ee suuqa dhoofinta.
ADX; celceliska mowqifka
Heerka Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Dhexdhexaadka ah (ADX) waxaa loogu talagalay inuu yahay tilmaame ganacsi si loo dhiso awoodda isbeddelka adoo cabiraaya dhaqdhaqaaqa qiimaha hal dhinac. ADX waa qayb ka mid ah Nidaamka Dhaqdhaqaaqa Tilmaamaha oo abuuray oo daabacay J. Welles Wilder waana celceliska ka yimid tilmaamayaasha Hagaha.
Tani waxay la xiriirtaa Heshiiska Macaamiisha FXCC. Dhammaan macaamiishu waa inay aqriyaan kadibna aqbalaan shuruudaha ganacsiga iyagoo saxiixaya (elektaroonik ahaan haddii loo baahdo) Heshiiska Macaamiisha FXCC, ka hor inta aan la furin xisaab FXCC.
Mashruuca ganacsiga FXCC.
Kani waa isku xidhka barnaamijka software si uu ula xiriiro barnaamijyada kale ee software. Iyadoo la tixraacayo ganacsiga forex ganacsi, API ayaa loola jeedaa interface, taasoo awood u siinaysa in ay ku xirmaan suuqa Forex. API-yada waxaa ku jira qaababka horumarinta ee u oggolaanaya wadaagista macluumaadka, sida: qiimaha qiimaha jumlada ah iyo amarada ganacsiga / fulinta.
Qiimaha sarrifka ayaa kordha, ama wuxuu xoojiyaa, isagoo ka jawaabaya horumarka dhaqaale iyo sidaas darteed falcelinta suuqa.
Waa erey la adeegsado marka ganacsatada ganacsiga ee isla markiiba ay iibiyaan oo ay iibsadaan qalab lacageed oo isku mid ah (ama u dhigma) oo ujeedadoodu tahay inay ka faa'iidaystaan ​​qiimaha ama dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha.
Qiimaha lacagta alaabada, ama qalabka waxaa la siiyaa iibka by FXCC, ama koox kale oo miisaan leh. Weydiinta ama bixinta qiimaha waa mid waxtar leh qiimaha macmiilka la soo xigan doono marka uu / isagu isku dayayo inuu soo iibsado ama uu sii dheeraado.
Wax kasta oo wanaagsan oo leh qiime muhiim ah.
ATR; celceliska saxda ah
Tilmaamaha celceliska heerka dhabta ah (ATR) wuxuu cabbirayaa xajmiga muddada kormeerka, iyadoo la tixgelinayo farqiga u dhexeeya xilligii hore ee ganacsiga.
Ganacsi la aqbaley iyo calaamad caalami ah oo la aqoonsan yahay / wakhtiga, ee loogu talagalay lamaanaha lacagta AUD / USD.
Tani waa koox saddexaad oo macaamil uu siiyay awood ganacsi, ama wuxuu bixiyaa koontaroolka xisaabtanka macmiilka. FXCC ma aha, iyada oo la adeegsanayo ama haddii kale, u oggolaato ama ogolaato qaababka hawlgalka ee wakiilka idman. Sidaas daraadeed FXCC ma aqbalayso mas'uuliyad loo leeyahay habdhaqanka wakiilada ee idman.
Awood - Ganacsi
Tani waa istaraatijiyad ganacsi oo amarrada si toos ah loogu meeleeyay nidaam, ama barnaamij, oo badanaa loo yaqaano la-taliyeyaal khibrad leh ama EAs, iyada oo lid ku ah macaamiisha gacanta ku heynaya ganacsigooda / amarrada suuqa iyada oo loo marayo goobtooda. Amarka iibsashada ama iibinta waxaa lagu suuq geliyaa barnaamijka si loo hirgeliyo marka xuduudaha ay dejiyeen barnaamijka ganacsadaha, ugu dambeyntii la kulmay.
Dakhli saacad ah
Waxay ka dhigan tahay celceliska celceliska shaqaalaha ee la bixiyo saacad kasta bil la bixiyo.
Xafiiska Dib u celinta
Qaybta Xafiiska Xafiiska Dib-u-celinta FXCC waxay la socotaa koontada xisaabaadka, miisaaniyadu waxay u wareejisaa koontada macmiilka, arrimaha dib-u-heshiisiinta, weydiimaha macmiilaha iyo waxqabadyo kale oo guud oo ku saabsan waxqabadka aan si toos ah uga qayb galin iibsashada, ama iibinta lamaanaha lacagta.
Waa habka istiraatiijiyada ganacsiga lagu tijaabiyo iyadoo la adeegsanayo xogta taariikhiga ah si loo xaqiijiyo in nidaamka ganacsigu yahay mid waxtar leh, si looga hortago khatarta ganacsiga ee caasimadda ganacsadaha.
Waa qoraalka soo koobaya isbeddelka guud ee qiimaha guud ee u dhexeeya lacagaha gudaha iyo dibaddaba muddo cayiman. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa dheelitirka lacagaha caalamiga ah iyada oo ay ku jirto macaamilka ka dhexeeya dadka degan dalka iyo kuwa aan degenayn.
Isu-dheellitirka Ganacsiga, ama Deynta Ganacsiga
Waa farqiga u dhaxeeya soo dejinta dalka iyo soo dhoofinta mudo gaar ah. Sidoo kale waa qaybta ugu muhiimsan ee xisaabteeda hadda jirta. Marka laga hadlayo in dal uu dhoofo qiimo ka badan inta uu soo dejinayo, markaa waddanku wuxuu leeyahay ganacsi dheeri ah, ka dibna waddankiisa, haddii waddanku uu ku jiro xaalad dib u dhac ganacsi ah (farqiga ganacsiga), lacagta iyo la-hawlgalayaasheeda ganacsiga ayaa hoos u dhigi doonta, ama daciifinta, samaynta kharashka soo dejinta qaaliga ah iyo dhoofinta ka jaban kuwa wada-hawlgalayaasha ganacsiga.
Bangiga loogu talagalay Degsiimada Caalamiga (BIS)
Waa hay'ad maaliyadeed oo caalami ah oo kor u qaadaysa iskaashiga bangiyada dhexe iyada oo ujeedadu tahay in la kobciyo xasiloonida iyo wadaagista macluumaadka ee ka dhexeeya bangiyada dhexe ee adduunka. Ujeedada kale waa in ay noqoto xarun muhiim u ah dhammaan cilmi baarista dhaqaalaha.
Waxaa lagu qeexay sida laynka amaahda ah ee ay bixiso bangiga macmiilka, tan waxaa badanaa lagu magacaabaa "line".
Maalinta Bangiga (ama Maalinta Ganacsiga)
Maalinta bangiga waa maalinta ganacsiga ee bangiga. Waxaa ka mid ah dhammaan maalmaha xafiisyada bangiyada loo furay ganacsi dadweynaha, halkaas oo ganacsi ay ka mid yihiin dhammaan bangiyada. Badanaa maalin bangiga waa maalin kasta marka laga reebo sabtida, Axadda iyo fasaxyada sharciga ah ee la qeexay.
Bangiga dhexe ee Japan.
Waxaa loo isticmaali karaa lacag caddaan ah, waana warqad ay soo saarto bangiga dhexe sida nooca qalabka shukaansiga ah (ballanqaad calaamad ah), kaas oo la siinaayo qofka raba inuu dalbado.
Waa dulsaarka dulsaar ee ku saleysan bangiga dhexe ee ujuura lacagta uu u leeyahay habka bangiyada ee gudaha.
Tani waxaa loo yaqaanaa lacagta ugu horeysa ee lamaanaha lacagta. Lacagta aasaasiga ah sidoo kale waa lacagta oo ah maalgeliye (soo saaraha), haya buugiisa xisaabaadka. Suuqyada FX, Doolarka Maraykanka waxaa sida caadiga ah loo tixgeliyaa inuu yahay lacagta asaasiga ah ee inta badan faqradaha FX; Qodobbada waxaa lagu qeexayaa cutub ah $ 1 USD, lid ku ah lacagta kale ee lagu soo xigtay labada nin. Ka reeban heshiiskaan waa: British Pound, Euro iyo Australian Dollar.
Heerka asaasiga ah waa dulsaarka dulsaarka ah ee bangiga dhexe, sida Bank of England ama Federal Reserve, waxay ku dallacayaan inay lacag siiyaan bangiyada ganacsiga. Kuwa khatarta leh ee khatarta leh waxay bixin doonaan qadar yar oo sicirka saldhigga ah, lacagaha tayada hooseeya waxay bixin doonaan qadar sare, oo ka sarreeya heerka salka.
Hal boqolkiiba hal boqolkiiba. Tusaale ahaan; farqiga u dhexeeya 3.75% iyo 3.76%.
Qiimaha lagu caddeeyey heerka celceliska sanadlaha ah ama marka la eego badeecada qaan-celinta halkii laga bixin lahaa qiimaha marka la eego lacagta.
Suuq geynta waa xaalad suuq ah oo ay jirto mudo sii socota (guud ahaan) qiimaha hoos u dhaca alaabta maalgashiga gaarka ah.
Isbeddelka xaaladda suuqa ee maalgashadayaasha iyo / ama ganacsatada, kuwaas oo ku gaaban wax soo saarka maalgashiga, waa in ay dib u iibsadaan maalgashi ka sarreeya qiimaha ka sarreeya marka loo iibiyo, haddii kale sicirada sicirka suuqa / xisaabta, ama ganacsigooda / s. Goobta cadaadiska ayaa noqon karta dhacdo caalami ah oo laga abuuray suuqyada maalgashiga, badanaaba bangiyada dhexe ama kuwa wax iibsada.
Maalgaliye ayaa aaminsan in qiimaha alaabta maalgashiga uu dhici doono.
Buug Beerid waa magac caadi ahaan loo isticmaalo warbixinta Fed, oo la daabacay oo keliya kahor shirka FOMC ee dulsaarka dulsaarka. Waxaa la heli karaa dadweynaha siddeed (8) sanadkiiba.
Qiimaha ay FXCC (ama mid kale oo liddi ku ah) u soo bandhigto inuu soo iibsado labada lacag ee macmiilka. Waa qiimaha macmiilka la soo xigan doono marka uu doonayo inuu iibiyo (tago gaaban) boos.
Bid / Weydii Faafid
Farqiga u dhexeeya dalbashada iyo weydii qiimaha.
Waxay caadi ahaan u celisaa labada ama saddexda lambar ee ugu horreeya qiimaha lacagta. Tusaale ahaan; EUR / USD sicirka sarrifka ah .9630 waxay tusineysaa '0' oo ah shaxda koowaad. Sidaa darteed qiimaha ayaa noqon doona 0.9630, oo leh "tirakoobka weyn" oo ah 0.96.
Tilmaame farsamo oo qiyaasaya isbeddel, oo uu abuuray John Bollinger. Waxay bixiyaan qeexitaan qaraabo ah oo sarreeya oo hooseeyo, halkaasoo aan ku qiimeyn karno qiimaha sare ee qaybta sare iyo sida hooseeya ee qaybta hoose.
Fasax, ama jabi
Kala baxa waa erey loo adeegsado sharaxaadda si deg deg ah, si deg deg ah (ama dhicid) qiimaha qalab u horseedaya nasasho iyada oo loo marayo heerkii hore ee taageerada ama iska caabin.
Heshiiska Bretton Woods ee 1944
Tani waa boostada 'WWII heshiis taas oo keentay sicir bararka joogtada ah iyo qiime dahab ah. Heshiiska waxaa lagu sameeyey inta u dhaxaysa wufuud ka kala timid dalal madaxbanaan oo madax bannaan oo matala dhaqaalaha adduunka.
Wakiil, sida FXCC, oo fuliya amarrada iibsashada iyo iibinta alaabada maaliyadeed, sida: lacagaha iyo qalabka kale ee la xiriira, ama komishanka, ama faa'iidada faafitaanka.
Dhisidda (Hoyga) Ogolaanshaha
Tirada mashaariicda cusub ee la oggol yahay oo ay bixiso dowlad ama hay'ad kale oo sharciyaysan ka hor inta aan dhismaha dhabta ahi bilaabmin sharci ahaan.
Mudo dheer oo ah qiimaha korodhka ah ee alaabada maalgelinta gaarka ah.
Maalgaliye ayaa aaminsan in qiimaha alaabooyinka maalgashiga gaarka ah ay kor u kici doonaan.
Bangiga Dhexe ee Jarmalka.
Maalin kasta marka bangiyada ganacsiga u furan yihiin ganacsi, oo aan ahayn Sabtida ama Axadda, xarunta maaliyadeed ee dalka.
Amar ay ku jiraan talooyin gaar ah oo lagu fulinayo macaamil ganacsi si aad u iibsato hanti qiimo go'an ama ka hooseeya. Laguma dhaqmin ilaa qiimaha suuqyadu uu (ama ka hooseeyo) qiimaha xaddidan. Nidaamka xayaysiinta iibsashada mar uu kiciyay, wuxuu noqonayaa amarka suuqa si uu ugu iibsado qiimaha suuqa ee hadda jira.
Joojinta iibsigu waa amar joogsi ah oo la duldhigay qiimaha lagu iibsado ee hadda, ma aha mid firfircooni ilaa suuqa uu qiimeeyo (ama ka sareeyo) qiimaha joogsiga. Amarka iibsashada iibsiga markasta oo uu kiciyay, wuxuu noqonayaa amarka suuqa si uu ugu iibsado qiimaha suuqa ee hadda jira.
Tani waa ereyga loo isticmaalo sicirka sarrifka lacagaha USD / GBP.
Nooc ka mid ah jaantuska oo ka kooban qaybo isku mid ah oo u ekaanshaha shaxanka. Waxay muujinaysaa qiimaha sare iyo qiimaha hooseeya, iyo sidoo kale qiimaha furitaanka iyo xidhitaanka.
Qaddarka laga yaabo in lagu xisaabiyo ama ka soo baxo koontada si loo helo lamaane lacag ah halkaasoo sicirka dulsaarka dulsaarka ah ee ka kooban qeybaha kala duwan.
Marka laga hadlayo dhaqdhaqaaqa ganacsiga Forex, ganacsiga qaadashadu waa istaraatijiyad maalgaliye oo dulsaar ku leh dakhliga hoose ee dulsaarka, si uu u maalgaliyo hantida oo laga yaabo in uu keeno soo celin sare. Istaraatiijiyadani aad ayey ugu badan tahay suuqa sarrifka lacagaha, marka bangiyada dhexe ee heerarka amaahda ay ka cararaan.
Tani waa maalin isku mid ah dejinta waajibaadka.
Iyadoo la tixraacayo macaamil ganacsi lacageed ayaa la dajiyay maalinta laqabanayo.
Lacag caddaan ah oo ku meelgaadh ah waxay u dhigantaa inta ay tahay miisaaniyadda lagu soo shubo xisaabta, iyadoo la tixgelinayo in lagu daro ama laga yareeyo jagooyinka tooska ah, faa'iidada iyo luminta, iyo sidoo kale deymaha kale, ama deymaha, sida baqshiishyada iyo komishanku (haddii ay jiraan khuseeyo).
Heerka Ganacsiga Badeecadaha (CCI) ayaa isbarbardhigaya sicirka caadiga ah ee suuqa oo celcelis ahaan qiimaha celceliska lagu arkay daaqad caadi ah oo ah xilliyada 20.
Bangi, oo mas'uul ka ah xakamaynta siyaasadda lacagta ee waddanka ama gobollada. Bankiga dhexe waa bangiga dhexe ee Maraykanka, Bankiga Dhexe ee Yurub waa bangiga dhexe ee Yurub, Bank of England waa bangiga dhexe ee England iyo Bank of Japan waa bangiga dhexe ee Japan.
Waxqabadka Bangiga Dhexe
Xeerka bangiga dhexe, ama bangiyada dhexe waxay galaan suuq lacageedka sarrifka ah ee isku daya in ay saameyn ku yeeshaan baahida iyo dalabka, si toos ah u iibsashada (ama iibinta) sarrifka dibadda.
Guddiga Ganacsiga Badeecadaha Mushaharka, tani waa hay'ad Federaali ah oo Federaali ah oo Maraykan ah oo lagu iibiyo suuqyada badeecadaha, oo ay ku jiraan mustaqbalka maaliyadeed.
Waa erey la isticmaalay markii sicirka la dhexdhexaadiyay laba xariiq oo isku mid ah (taageerada iyo heerarka isdilka) mudo gaar ah.
Tani waxaa loo tixgeliyaa in uu yahay shakhsi daraasad xogta garaafyada iyo jaantusyada xogta taariikhiga ah, si loo dardar geliyo si loo go'aamiyo isbeddellada, ama qaababka dhaqdhaqaaqa qiimaha, kaas oo gacan ka geysan doona saadaalinta jihada iyo isbeddelka alaab maalgeed gaar ah. Waa nooc gaar ah oo ah farsameyaal falanqayn farsamo.
CHF waa soo gaabinta Faransiiska Swiss, lacagta dalka Switzerland iyo Liechtenstein. Faransiiska Swiss waxaa loo yaqaan 'Swissie' iyadoo ganacsato lacag ah.
Miisaaniyada la caddeeyey
Miisaaniyada si xor ah loo heli karo, oo ka dhalata dejinta ganacsiga, ama ganacsiga.
Macmiilka ama Macaamiisha
Hantidhawrka FXCC. Qofka macaamilka ah, ama haystaha koontada wuxuu noqon karaa: shakhsiyan, maamulaha lacagaha, shirkad shirkadeed, xisaab bangi, ama cid kasta oo sharci ah oo daneyneysa qiimaha iyo waxqabadka koontada.
Meelaha xiran waxaa loola jeedaa mawqifka aan hadda jirin sababtoo ah ganacsade ayaa suuqii ka baxay suuqgiisa si waafaqsan go'aankiisa. Tusaale ahaan, booska iibka ayaa noqon doona mid ka hortagaya jagada iibsiga iyo waliba dhinaca kale.
Chicago Ganacsi Lacageed.
Khidmadda uu leeyahay dammaanad sida FXCC ayaa laga yaabaa inuu lacag ka qaado ganacsiga.
Waxaa jira sadex sawir oo labo jajab ah oo ay ku jiraan lacagaha laga helo waddamada leh badeecooyin badan / kaydka macdanta dabiiciga ah. Lammaaneyaasha badeecadaha waa: USD / CAD, USD / AUD, USD / NZD. Lammaanayaasha badeecadaha ayaa aad u sarreeya isbedelka qiimaha badeecadda. Ganacsatada doonaya in ay soo bandhigaan isbeddelka suuqyada badeecadaha, had iyo jeer waxay eegaan in ay ganacsigaan ganacsigaan.
Warqad elektaroonik ah, ama daabacan oo isbeddel ah oo ay isweydaarsadaan sharaxaad ka bixinayaan dhammaan faahfaahinta habboon ee dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha.
Iskuxidhku waa erey loo isticmaalo in lagu sharaxo xilliga qiimaha uu yaryahay mid aan cakirnayn oo uu ku socdo dhinac.
Qiyaasta guud ee guud ee rajada ku hareeraysan xaaladaha maaliyadeed ee ku jira dhaqaalaha iyo xaaladaha dhaqaale shakhsi ahaaneed.
Index Price Consumer
Tani waxaa lagu qeexayaa sida qiyaasta billaha ah ee isbeddelka heerarka qiimaha ee dambiisha alaabta macaamiisha, badanaa waxaa ka mid ah: cuntada, dharka, iyo gaadiidka. Dalalka waxay ku kala duwan yihiin qaabkooda kirada iyo deynka.
Sii waditaan waa ereyo sida badan loo isticmaalo marka la filayo in isbeddelku uu kordhayo koorsadiisa.
Heshiiska OTC (Heshiiska Ka-hortagga) ee lagu sameeyey FXCC si uu u iibsado ama u iibiyo caddad cayiman oo ah lacag gaar ah, oo ah qaddar cayiman oo ah lacag kale, halkaasoo heshiisku ku qoran yahay taariikh qiime go'an (sida caadiga ah taariikhda goobta). Heerka sarrifka lacagta ajnabiga ah ee labada dhinac ayaa qandaraas lagu go'aamin doonaa qadarka qandaraaska.
Qiimaha loo isticmaalo in lagu beddelo qadar lacageed oo gaar ah 'faa'iido darajo doolar / khasaaro doolar oo dollar ah, dhammaadka maalin kasta oo ganacsiga.
Lacagta la beddeli karo
Sarrifka oo si xor ah u ganacsan kara lacagaha kale ee aan lahayn xayiraad sharciyaysan. Waxay guud ahaan xiriir la leeyihiin dhaqaalaha furfuran iyo xasiloonida, siciradooda qiime ahaan waxaa lagu go'aamiyaa iyada oo loo marayo sahayda iyo dalabka suuqa sarrifka lacagaha.
Waa dhaqdhaqaaq dib u dhac ah oo shuruudaha loo isticmaalo si loo qeexo tallaabo qiimaha inta lagu gudajiro qayb ka mid ah isbeddellada.
Wakiilka bangiga shisheeye, oo bixiya adeegyo isagoo ka wakiil ah hay'ad kale oo maaliyadeed, oo aan laan ka lahayn xaruunta maaliyadeed ee khuseeya, tusaale ahaan; si loo fududeeyo gudbinta maalgalinta ama dhaqdhaqaaqa ganacsi.
Lacagta La Dagaalay
Lacagta labaad ee lamaanaha lacagta. Tusaale ahaan; ee lacagta EUR / USD, lacagta lacagta lagala soo galo waa USD.
Shakhsi ama bangiga oo ka qayb qaata is-dhaafsiga maaliyadeed ee caalamiga ah iyo waa kan wax-qabadka heshiiska sida deynta.
Waxay tilmaamaysaa suurtogalnimada dal ay ku heshiin karaan ama saameyn ku yeelan karaan qiimaha lacagta. Qiimaha xaddidan ee xaddiga gadashada xadka waa inuu ka sarreeyaa sicirka iibka ee hadda jira ee ku lug leh qiimeynta dhaqaalaha, siyaasadeed iyo juqraafi ee dal gaar ah, si loo go'aamiyo xasilloonida guud.
Sameynta macaamil ganacsi oo ugu dambeyntii xiran boos.
Tani waxaa kale oo loo yaqaan "biin la isku hagaajin karo". Tani waxaa lagu qeexay heerka heerka sarrifka ee dalka loo dejiyey, marka loo eego lacag kale.
Iskujir Qandaraas Lacageed
Heshiiska xajmiga ah ee iibka, ama iibiya hal shisheeye, beddelka lacag kale oo khaas ah. Qiimaha lacagta la beddelay ma ahan US Dollar.
Lacagta aan ku jirin USD.
Sarrifka sarrifka ah ee u dhaxeeya laba lacag, midkoodna waa lacagta rasmiga ah ee dalka iyo labadaba waxaa lagu qeexay lacagta saddexaad.
Cryptocurrencies waa dijitaal, lacago wata oo isticmaalaya cryptography amniga macaamilka. Maadaama aan la bixin bangiyada dhexe, ama dowladaha waxaa loo gudbiyaa dabeecadda dabiiciga ah, taas oo aragti ahaaneed ka dhigaysa in ay ka hor istaagto faragelinta dawladda, ama fara-gelinta, sida Bitcoin.
Waa waraaqda birta ama waraaqaha, marka isticmaalka dhabta ah ama wareegga, sida caadiga ah isweydaarsiga, oo si khaas ah loogu wareejiyo lacagta waraaqaha iyo lacagta.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa in la yareeyo khatarta lacagta saliidda ee lacag-bixinta ah, waxaana loo yaqaannaa xulasho lacag ah oo celceliska miisaanka culeyska loo isticmaalo si loo cabbiro qiimaha ballanqaad dhaqaale.
Waa barnaamij elektaroonik ah oo loo isticmaalo beddelidda lacagaha; Xisaabiye oo beddelaya qiimaha hal lacagta ah qiimaha lacagta kale. Tusaale ahaan; doolar si euro. Converters waa in ay isticmaalaan qiimaha ugu dambeeyay suuqa ee laga heli karo suuqa sarrifka lacagaha.
Kala doorashooyinka sarrifka ayaa iibiya iibsadaha saxda ah, laakiin maaha ballanqaad, in lagu beddelo qaddar go'an oo lacag ah oo loogu talagalay hal lacag oo mid kale ah qiime go'an taariikhda la cayimay.
Loo qeexay laba lacag oo lacag ah oo ah lacag isweydaarsi shisheeye. 'EUR / USD' ayaa tusaale u ah labada lamaane.
Khatarta isbeddelka aan fiicnayn ee sicirka sarrifka.
Kuwani waa sadaxda aqoonsi ee ay sameeyeen ISO (Urur caalami ah oo loogu talagalay istaandareynta) iyo sida caadiga ah loo isticmaalo meel magacyo buuxa leh. Tusaale ahaan: USD, JPY, GBP, EUR, iyo CHF.
Kuwa ugu badan ee lagu magacaabo urur shaqaale waa euro-da. Waa heshiis ah laba ama in ka badan wadamo badan si ay u wadaagaan lacag caadi ah (ama peg), si ay u ilaaliyaan sicirkooda sarrifka ah si ay u ilaaliyaan qiimaha lacagtooda heer gaar ah. Xubnaha ururka shaqaaluhu waxay kaloo wadaagaan siyaasad sarrifeed lacageed oo lacag ah.
Arjiga Aqoonsiga Macaamiisha
Habka codsiga FXCC ee dhammaan macaamiisha waa in ay dhameystiraan oo ay u gudbiyaan aqbalaad ka timid FXCC, ka hor intaan wax iibin karin.
Khariidad Maalin Joogta ah (xiran maalmaaha ganacsiga)
Tani waa hal dhibic wakhtiga, inta lagu jiro maalin ganacsi oo gaar ah, oo matala dhammaadka maalinta ganacsiga. Taariikhda ganacsiga ee heshiis kasta oo la galay ka dib markii la gooyo maalin kasta, waxaa loo tixgeliyaa in la fuliyay maalinta maalmaha xigta.
Iibso ama iibiso amarka haddii aan la fulin maalinta qaaska ah, markaa si toos ah ayaa loo joojinayaa.
Waxaa loola jeedaa ganacsi la furay oo la xidhay isla maalintaa.
Saariyeyaasha iyo ganacsatada qaata mawaadiicda alaabooyinka maalgashiga, oo markaa la sii daayo ka hor inta aan la gaarin maalintiiba ganacsiga, waxaa lagu qeexay sida ganacsatada maalinta.
Ganacsatada ayaa laga yaabaa inay doorbidaan inay xafidaan diiwaannada dhammaan waxqabadyada la fuliyay muddad gaar ah. Qorshaha shakhsi ahaaneed ee shakhsi ahaaneed wuxuu ka kooban yahay dhammaan macluumaadka aasaasiga ah ee la xiriira macaamilka. Ganacsiga tartiib-tartiibka ah ee wax ka qabta qashinka waxaa laga yaabaa inay ku jiraan macluumaadka sida furitaanka iyo xidhitaanka jagooyinka lacagta, oo ay bilaabeen ganacsade.
Waa taariikhda ay macaamilku ku heshiiyeen.
Suuqa sarrifka ayaa furan 24 / 5, sidaa daraadeed hay'ado badan ayaa ka shaqeynaya miisaska meelo kala duwan. Maareynta miisaska ayaa sidoo kale laga helaa dibadda suuqa suuqyada; ee bangiyada iyo shirkadaha maalgelinta, si ay u fuliyaan tafaariiqda suuqyo badan. Maareynta miisaska shirkadaha ganacsiga, marka ganacsiga forex sida ganacsadaha tafaariiqda, waxay inta badan dejiyaan qiimaha ay ku leeyihiin oo ay ku faafaan markay bixiyaan ganacsiga forex ee macaamiishooda, iyada oo laga soo horjeedo in ay si toos ah u galaan suuqa, tusaale ahaan, si toos ah iyada oo loo marayo hababka wax soo saarka.
Tani waa habka ugu muhiimsan ee loo qoro macluumaadka aasaasiga ah ee la xiriira dhaqdhaqaaqa dhaqaale.
Shakhsi (ama shirkad) oo u shaqeeya maamulaha, halkii uu ka ahaan lahaa wakiil, ee ah isweydaarsiga sarrifka lacagaha (iibsashada ama iibinta). Ganacsatada ganacsigooda ganacsigooda ah, ganacsigooda ganacsigooda waxay ku iibsadaan khatartooda.
Tan waxaa lagu qeexay sida jebinta heshiiska qandaraaska.
Isku dheelitir la'aanta ganacsiga.
DEMA, (laba isku celcelin ah celceliska wareega)
Waxaa abuuray farsamayaqaan Patrick Mulloy, celcelis ahaan laba meelood oo loo yaqaan 'DEMA' oo isku dayaya inay bixiyaan celcelis isku dheelitiran iyadoo la xisaabinayo habka celceliska habka celceliska, oo laga yaabo in ay ka yar tahay celceliska heerka caadiga ah ee wareega. Xisaabinta ayaa sidoo kale ka dhib badan celceliska dhaqdhaqaaqa.
Waa hoos u dhac ku yimaada qiimaha sarrifka ee lacagaha kale, sababtoo ah ciidamada suuqa.
Qoto dheer ee suuqa
Tani waa qiyaasta cabbirka mugga waxayna muujineysaa qiimaha dakhliga ee loo heli karo ujeedooyinka macaamil ahaan (tusaale ahaan) tusaale ahaan lacag lab ah oo gaar ah, waqti go'an.
Marka la eego ganacsiga lacagta, waa xogta loo baahan yahay si loo dhammeeyo macaamil ganacsi lacageed, tusaale ahaan; magaca, qiimaha, iyo taariikhaha.
Qiimeeyntu waa qiimeyn hoose oo ka mid ah lacagta waddanka oo ka soo horjeeda: lacag kale, koox lacag ah, ama heer caadi ah. Qiimeeyntu waa barnaamij siyaasadeed lacageed oo loo isticmaalo waddamada leh sicir sicir go'an, ama heerka sarrifka sarrifka ah. Qiime-dhimista waxaa hirgeliya dowladda iyo bangiga dhexe ee bixiya lacag. Dal ayaa laga yaabaa in ay lacagtiisa lacageed u rogto, tusaale ahaan, isku dheelitir la'aanta ganacsiga isdaba-marinta.
Tani waa sawir lagu xisaabiyo shabakadda canshuurta iyo wixii kharash ah ee kharashka shakhsiga ah.
Kala soocista waxay noqon kartaa mid wanaagsan ama mid xun, waana calaamad muujinaysa isbeddel ku yimid dhaqdhaqaaqa qiimaha.
Deutsche Mark. Lacagta hore ee Jarmalka ka hor inta aan la beddelin euro.
DMI, muujinta dhaqdhaqaaqa hogaaminta
Tilmaamaha Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa (DMI) waa qaybo ka mid ah habka tilmaamida Hagaha Dhaqdhaqaaqa Hagaha oo abuuray oo daabacay aasaasihii tilmaamayaasha ganacsiga, J. Welles Wilder. Waxay ku xisaabtamaan tandem iyadoo la eegayo Dhaqdhaqaaq Dhexdhexaad Dhexdhexaad ah (ADX). Laba tilmaamood ayaa loo qoondeeyey, DI (+ DI) iyo DI (Negative DI (-DIS).
Shumaca oo qaabeeya marka qiimaha furan iyo dhowba ay ku dhow yihiin siman yihiin. Waxay u taagan tahay heer dhexdhexaad ah oo u dhexeeya sare iyo hoose, laakiin qiyaas aad u yar oo u dhexeeya qiimaha furan oo xiran oo u ekaa iskutallaabta ama iskutallaabta rogan.
Heerka doolarka waxaa lagu qeexay sicirka sarrifka ah ee sicirka gaarka ah ee doolarka (USD). Inta badan sicirrada sarrifka ah waxay u isticmaalaan dollarka sida lacagta aasaasiga ah iyo lacagaha kale ee lacagaha lagu soo iibsado.
Tan waxaa lagu qeexayaa heerka dulsaarka ee lagu dabaqayo xisaabinta, ama lacag maalgelinta waddanka asalka ah.
Ereyga ay isticmaalaan wakiillada FXCC si ay u muujiyaan in heshiiska afka ah la fuliyay oo hadda ah heshiis qadarin ah.
Isticmaalka falanqayn farsamo sida qaab shaxan ah oo laga yaabo inay muujiso dhaqdhaqaaqa qiimaha mustaqbalka ee mustaqbalka
Isticmaalka falanqayn farsamo oo ah qaab shaxeyn oo muujin kara dhaqdhaqaaqa qiimaha mustaqbalka.
Dhaqan ahaan waxaa loola jeedaa dareenka ama qaabka luuqadda loo isticmaalo marka bangiga dhexe uu raadinayo dhaqaale u kicin karo, ayna u egtahay in uusan qaadin tallaabooyin dagaal ah oo ku saabsan sicirbararka.
Amarka alaabooyinka daba joogga ah
Waa tilmaame dhaqaale oo ka tarjumaya amarro cusub oo la geliyay kuwa guryaha soo geliya guryaha xilli dhow. Waxay cabbiraysaa xoogga wax soo saarka waxayna ka caawisaa maalgashadayaasha inay aqoonsadaan isbeddellada koritaanka dhaqaalaha.
Waxaa lagu qeexay tallaabooyin ay qaadeen bangi dhexe, iyada oo ujeedadu tahay in kor loo qaado lacagta, iyada oo ujeedadu tahay in la kiciyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale, gaar ahaan dhiirigelinta sicir bararka.
Tani waa jadwal loo isticmaalo in lagu kormeero tilmaamayaasha dhaqaalaha, jaangooyooyinka, xogta iyo warbixinnada ay u baahan tahay in laga sii daayo waddan kasta, gobol iyo shirkado falanqayn oo madax banaan. Iyadoo ku xiran saameynta ay ku leeyihiin suuqyada, bixinta xogta ayaa sida caadiga ah la qiimeeyay; kuwa saadaaliyay inay saameyn weyn ku yeeshaan waxaa badanaa lagu qeexaa "saameyn sare".
Aqoonsi guud oo ay bixiso dawlad-goboleed, oo muujinaysa kobaca dhaqaale ee hadda la xidhiidha tusmada.
Waa taxane muujinaya awooda lacagta la barbardhigayo dambiilaha lacagaha kale. Waxa kale oo loo arki karaa inay tahay isku day lagu doonayo in lagu soo koobo saameynta ku dheehanaanta ganacsiga dalka ee isbeddelada lacageed ee ku wajahan lacagaha kale.
Xawilaadda Hantida Waxtarka
EMA, celcelis ahaan dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa
Celceliska Dhaqdhaqaaqa Iskujira (EMA) wuxuu u dhigmaa celcelis ahaan qiimaha, miisaanka xisaabaadka dheeraadka ah ee qiimaha ugu dambeeyay. Miisaanka loo adeegsado qiimaha ugu dambeeyay wuxuu ku xiran yahay xilliga la doortay ee celceliska dhaqdhaqaaqa ee loo yaqaan 'user'. Mudada gaaban ee EMA, miisaanka badan ayaa lagu dabaqayaa qiimaha ugu dambeeyay.
Heerka Qiimaha Shaqada (ECI)
Tilmaamayaal dhaqaale oo Maraykan ah oo cabbiraya heerka koritaanka iyo sicir-bararka kharashka shaqada.
Dhammaadka Amarka Maalinta (EOD)
Tan waxaa lagu qeexay amar ah inaad iibsato, ama iibiso qalabka maaliyadeed qiimo go'an, amarku wuu furanyahay ilaa dhammaadka ganacsiga.
Waxaa lagu qeexay xaalad ka dhacda suuqa lacagta euroda Bankiga Dhexe, marka labadaba dalabka iyo qiimaha dalabaadka muddad gaar ah, ay yihiin kuwo isku mid ah.
Ganacsi Lacageed Macquul ah
Suuqyada ganacsi ee loo marayo akoonnada shabakada internetka. Ganacsiga sarrifka elektarooniga ah wuxuu ka kooban yahay beddelaadda lacagta aasaasiga ah ee lacagta ajnabiga ah, marka laga eego sicirka suuqgeynta ee suuqa, iyada oo loo marayo akoonnada shabakada internetka. Iyadoo loo marayo tiknoolajiyadda macluumaadka, waxay keenaysaa iibsadaha iyo iibiyeyaasha wadajir ah oo isticmaalaya nidaam ganacsi oo elektaroonig ah oo abuuraya meelo suuq ah.
Tani waa lacagta kaliya ee sarrifka ah ee ururka Midowga Yurub.
Bangiga Dhexe ee Yurub (ECB)
Bangiga dhexe ee Midowga Yurub.
Qaybta Hantidhowrka Yurub (ECU)
A basket ka mid ah lacagaha xubin ka ah EU.
Ururka Midowga Dhaqaalaha ee Midowga Yurub (EMU)
Nidaamka isdhexgalka ee u dhaxeeya xubnaha Midowga Yurub, waxay ku lug leedahay isuduwidda siyaasadaha dhaqaalaha iyo maaliyadda, iyo lacagta caadiga ah 'euro.
Waxaa lagu qeexay dhaqaale sarrifeed lacageed oo maalgeliya lacagta euroda, si toos ah, ama qaab euro ah oo lagu dhajiyo qalabka deynta muddada gaaban.
Tani waa dulsaarka dulsaarka ee lagaga soo xigtay lacagta euro mudo cayiman.
Eurocurrency waa lacag caddaan ah oo ka baxsan suuqyadeeda ay ku leedahay dowladaha qaranka ama shirkadaha. Tani waxay khuseysaa lacag kasta iyo bangiyada waddan kasta. Tusaale ahaan; Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu soo galiyay bangiga Koonfur Afrika, kadibna waxaa loo tixgelinayaa inay tahay "eurocurrency". Waxa kale oo loo yaqaan "euromoney."
Eurodollars waxaa lagu qeexay inay yihiin lacagaha wakhtiga lagu qiyaasay ee lagu qiyaaso doolarka Maraykanka, bangiyada ka baxsan Maraykanka, sidaas darteed ma ay hoos imanayaan awooda dawladda dhexe. Sababtoo ah lacagahaas oo kale waxay ku xiran yihiin xeerar aan ka badnayn, tusaale ahaan, lacagaha la midka ah ee ku yaala Maraykanka
Midawga Yurub (EU) waa koox ka mid ah dalalka 28 oo ka shaqeeya urur siyaasadeed iyo siyaasadeed. Kow iyo toban ka mid ah dalalka ay hadda isticmaalaan euro sida lacagta rasmiga ah. Suuqa Suuqa Yurub ee Yurub ayaa waxaa aasaasay dalalka 12 ee 1993, si ay u hoggaansamaan afarta xoriyadood ee aasaasiga ah; dhaqdhaqaaqa: alaabada, adeegyada, dadka iyo lacagta.
Kaydka dulsaarada xad-dhaafka ah
Lacagta lagu shubo FXCC oo aan loo isticmaalin marinka ka horjeeda boosaska furan.
Marka la eego is-weydaarsiga macaamilka lacageed, bedelida waxaa guud ahaan loo qeexaa sida muuqaal ahaaneed oo ah qalab lagu iibsado oo inta badan lagu dhaqmo. Tusaalooyinka: New York Stock Exchange, Guddiga Ganacsiga ee Chicago.
Nidaam ay dejiso dawladaha iyo bangiyada dhexe si ay ujeedadeedu tahay xakamaynta isgaadhsiinta iyo isgaadhsiinta sarrifka lacagaha iyo qalabyada, si loogu daro: ruqsadaha lacagaha kala duwan, quotas, dalxiis, xaddid, canshuur iyo lacag dheeraad ah.
Habka Sarrifka Lacageed - ERM
Habka sarrifka lacagta ayaa ah fikradda qiyaasta sarrifka lacagaha sarrifka ah - nidaam loogu talagalay in lagu xakameeyo sarrifka lacagta sarrifka ah ee la xiriira lacagaha kale. Waxaa jira isbaddal qiimaha sicirka sarrifka ah ee xuduudaha marginsyada. Nidaamka sarrifka lacagta ayaa badanaa loo yaqaan nidaamka lacag-bixinta ee lacag-yar.
Sharraxaadda sarrifka ajnabiga ee lacag yar oo la suuq gashay iyo isweydaarsi. Lacagta qalaad waxay si fiican u socotaa oo aysan jirin qoto dheer oo suuqa, tusaale ahaan lacagta euro-da, sidaas awgeedna waxaa lagu iibiyaa qadar badan. Ganacsiga lacagta qalaad waxay badanaa noqon kartaa mid qaali ah marka laga hadlaayo qaddiyadaha - dalabka / dalabka waydiisanayaan, si joogto ah ayuu u ballaaran yahay. Meelaha aan si sahlan loo iibsan karin (ama la heli karo) ee xisaabxidhka caadiga ah ee sanduuqyada. Tusaalooyinka lacagaha qalaad waxaa ka mid ah Bahrain Thai iyo Dinar Ciraaq.
Waxay qeexaysaa khatarta la xidhiidha isbeddelka qiimaha suuqyada taas oo horseedi karta faa'iido ama khasaaro.
Waa warbixin ay soo saartay Tirakoobka Mareykanka oo bixiya faahfaahinta tirakoobka wax soosaarka ee amarrada aan joogtada aheyn oo joogto ah iyo alaabooyinka soo iibsiga, amarrada aan la ogayn, iyo saadadka soo saarayaasha guryaha.
Dhaqdhaqaaq deg-deg ah ee sicirka, ama suuqyada suuqa oo sababay isbeddel la'aanta baahida iyo dalabka shuruudaha iibsadaha iyo / ama iibiyeyaasha, ayaa sidoo kale loo yaqaanaa xaalad marka suuqyada dhaqaaluhu ay la kulmaan heerar aan caadi ahayn oo isdaba-joog ah, oo ay weheliso ganacsi aan caadi ahayn oo culus. Xaaladahan oo kale, ama qiimaha, waxaa laga yaabaa inaanay si fudud u heli karin macaamiisha ilaa suuqa si xawli ah dib u bilaabo.
Heerka Maalgalinta Cuntada
Waa dulsaarka dulsaarka ee hay'adda kaydka ah ay bixiso lacago lagu hayo Federal Reserve si hay'ad kale oo kaydka ah habeenkii. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo siyaasad lacageed isla markaana saameyn ku leh isbeddelka ku yimaada lacagta lacagta keena taas oo keenta isbedel ku yimaada heerka dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha Mareykanka.
Lacagta kaashka ah ee ay leeyihiin bangiyada ee gacanta ku haya maareynta bangiga kaydka ee degaanka.
Tani waa mid loo soo gaabiyo Bangiga Dhexe ee Maraykanka.
Guddiga Farsamada ee Federaalka
Sidoo kale loo yaqaano FOMC. Tani waa shakhsiyaadka shakhsiyaadka go'aaminaya habka siyaasadda lacagta ee lagu qaban doono Maraykanka. Xafiiska FOMC wuxuu si toos ah uga mas'uul ah inuu jabiyo heerka lacagta federaalka iyo heerka dhimista. Labada qiimaha ayaa ah kuwo saameyn ku leh xakamaynta heerarka korriinka lacagta iyo heerarka hawlaha dhaqaale ee Mareykanka.
Guddiga Dhexe ee Dhexe
Guddiga Nidaamka Kaydka Federaalka, oo uu magacaabay Madaxweynaha Maraykanka ee 14, mid ka mid ah guddiga ayaa sidoo kale loo magacaabay afar sano oo ah guddoomiyaha.
Reserve Federaalka System
Nidaamka bangiga dhexe ee Maraykanka, oo ka kooban Bangiyada Dhexe ee 12, oo xakameynaya degmooyinka 12 ee si toos ah u maamula Guddiga Dhexe ee Kaydka. Xubinnimada Feddu waa qasab in ay bangiyada ay hoos u dhigtay Jaan-gooyaha Sicilada iyo ikhtiyaarrada bangiyada dawlad-goboleedka.
Waa erey loo adeegsado falanqayn farsamo oo loola jeedo heerarka taageerada iyo isbeddelka hagaajinta ayaa laga yaabaa in lagu dhufto ka hor inta uusan ku noqon jihada dhaqdhaqaaqa qiimaha weyn.
Buuxi, ama buuxi
Tani waa heshiis lagu fuliyay oo ka wakiil ah / koontada macmiilka sababtoo ah amarka macaamiisha. Markii la buuxiyo, amarka lama tirtiri karo, wax laga beddelo, ama laga dhaafo macmiilka.
Waa qiimaha uu amarka amarka macmiilku ku socdo mudo dheer ama gaaban.
Tani waxaa lagu qeexay sida qiimaha qiimaha, oo loo bixiyay jawaab celinta codsi qiimo firfircoon, taas oo damaanad qaadaysa dalab ama weydiiso qiimaha ilaa laga soo xigtay. Waa qiimo ay xisbiyada soo jeedintu ay diyaar u yihiin in ay fuliyaan heshiis, dejinta degaanka.
Isticmaalka canshuur iyo / ama kicin ahaan sida qalab, si loo fuliyo siyaasadda lacagta.
Taariikhda Dheeraadka ah
Kuwani waa taariikhaha taariikhda kalandarka ee la midka ah goobta. Waxaa jira laba go'an. Wixii sharaxaad faahfaahsan ee dheeraad ah fiiri macluumaadka taariikhda qiimaha.
Tani waa heerka rasmiga ah ee ay dejisay hay'adaha lacagta. Waa lacag sicir ah oo lagu qeexayo lacag kale ama lacag kale.
Waxaa lagu qeexay hab lagu qiimeeyo heerka qiimaha ayadoo la dhisaayo qadar qiimeeynaya iibsadayaasha iibiya. Nidaamkani wuxuu dhacaa hal mar, ama laba jeer maalin kasta waqtiyada gaarka ah ee la qeexay. Waxaa isticmaala lacagaha qaar, gaar ahaan marka la dhiso qiimaha dalxiiska.
Xeerka Isdhaafsiga Macluumaadka Dhaqaalaha (FIX) ayaa la aasaasay 1992 waana nambar farsameed oo farshaxan ah oo lagu beddelayo macluumaadka la xiriira macaamil ganacsi iyo suuqyo.
Qiimaha sarrifka ah
Qeexida sicirka sarrifka ah ee sicirrada sicirka waxaa dejiya xoogagga suuqyada ee lagu dhejiyay sahayda iyo dalabaadka la barbar dhigo lacagaha kale. Hantida lacagaha dulsaareysa waxay ku xiran tahay maamulka lacagta. Marka waxqabadka noocan ahi uu soo noqnoqonayo, waxaa la yiraahdaa "float" waxaa loo yaqaanaa wasaqda wasakhda ah.
Guddiga Federaalka ee Furitaanka, waa guddiga Nidaamka Kaydka Federaalka oo ka kooban xubnaha 12 ee dejiya siyaasadda lacagta. Ogeysiisyada ayaa ku wargalin doona dadweynaha ku saabsan go'aamada lagu sameeyey dulsaarka.
Ereyga "sarrifka shisheeye" waxaa loola jeedaa ganacsiga sarrifka lacagaha sarrifka ah, ma jiro hal xarun dhexe oo la oggol yahay oo lagu aqoonsan karo isweydaarsiga ganacsiga. Ereyga waxaa kale oo uu tixraacayaa ganacsiga lacagta sarrifka sida isbeddelka IMM ee Chicago Mercantile Exchange.
Isbeddelka Dibadda Swap
Ganacsi lacageed oo ku lug leh iibka isku midka ah iyo iibinta laba lacag oo ku yaal taariikh cayiman oo ah qiyaasta lagu heshiiyey xilliga heshiiska qandaraaska, oo loo yaqaan 'lugta gaaban', taariikh dambe oo mustaqbalka ah waqtiga qandaraaska - 'lugta dheer'.
"Forex" waa magaca gaaban ee sarrifka lacagaha ajnabiga ah iyo badiyaa waxay loola jeedaa lacagta ganacsiga ee sarrifka ajnabiga.
Istaraatijiyad ganacsi oo loo isticmaalo ganacsatada forex isku dayaya in ay ka faa'iidaystaan ​​faraqa ah qiimaha qiimaha lamaanaha lacagta. Waxay qaadataa faa'iidada faafinta kala duwan ee ay bixiso dookha laba qof oo gaar ah. Istaraatiijiyadu waxay ku lug leedahay falcelinta si dhakhso ah fursadaha.
Waxaa lagu qeexay saacadaha ay ka qaybgalayaasha suuqyada suuqa ka iibsan karaan: iibsadaan, iibiyaan, isweydaarsadaan oo ay qiimeeyaan lacagta. Suuqa suuqa ayaa furan saacadaha 24 maalintii, shan maalmood usbuucii. Suuqyada suuqyada ayaa isku daraya: bangiyada, shirkadaha ganacsiga, bangiyada dhexe, shirkadaha maareynta maalgashiga, miisaannada qashinka, ganacsatada iibiya dukaamada tafaariiqda iyo maalgashadayaasha. Suuqa lacagaha ee caalamiga ah ma laha sarrifka dhexe, waxay ku lug leedahay shabakad caalami ah oo is-weydaarsi iyo baqaarro. Saacadaha ganacsiga ee Forex waxay ku saleysan yihiin marka ganacsiga uu furan yahay waddan kasta oo ka qaybgalaya. Marka suuqyada waawayn ay isku dhacaan; Asia, Yurub iyo Maraykanka, mugga ugu sarreeya ee ganacsigu wuxuu dhacaa.
Dhibcaha lacagta ee Forex
Tani waxay loola jeedaa qiyaasaha tilmaamayaasha, oo sida caadiga ah loo isticmaalo ganacsatada maalinta si ay si dhakhso ah u qeexaan haddii dareenka suuqa laga yaabo in uu isbeddel ka yimaado boorka si uu u xajiyo iyo kan kale. Si kale haddii loo dhigo, waxaa loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo heerarka taageerada iyo iska caabinta. Dhibcaha loo yaqaan 'Forex points' waxaa lagu xisaabiyaa celceliska: sare, hooseeya oo xiran (HLC), laga bilaabo casharkii maalinkii hore.
Lacagta Xawaaladda ee Forex
Lacagta faafitaanka ee ku lug leh shariifyada ku saabsan dhaqdhaqaaqa sicirka lacagta lamaanaha, dalbashada iyo qiimaha weydiisanaya.
Shirkadaha isdaba-joogga ah ee bixiya lacag-bixinta lacag bixinta waxay ku faafinayaan qiyaasta qiimaha laba qiimaha, dalabaadka iyo qiimaha weydiisto - faafitaanka. Ganacsatada ayaa ku qaylinaya haddii qiimaha lamaanaha ay ka hooseeyaan qiimaha dalbashada, ama ka sarreeya qiimaha weydiisanaya.
Barnaamijka ganacsiga kombuyuutarka kombiyuutarka ee ku saleysan calaamadaha farsamada ganacsiga, kaas oo gacan ka geysanaya in la go'aamiyo in la galo ganacsi lacag labeed lacag oo gaar ah waqti kasta. Raadiyeyaasha Forex, ee ganacsatada dukaamada ah, gaar ahaan, ayaa inta badan ku caawiya sidii looga saari lahaa qaybta maskaxda ee ganacsiga.
Tani waxaa lagu qeexi karaa ganacsi ku salaysan falanqeyn si loo go'aamiyo in la iibsado, ama lagu iibiyo lamaane lacag wakhti cayiman ah, oo badanaa ku saleysan calaamado muujinaya farsamooyinka falanqaynta farsamooyinka, ama dhacdooyinka aasaasiga ah ee wararka iyo xogta. Nidaamka Ganacsiga Ganacsiga Ganacsiga waxaa guud ahaan lagu sameeyaa calaamado farsamo oo abuuraya ama iibinaya go'aamada, kuwaas oo taariikh ahaan u horseedaya ganacsi faa'iido leh.
Mararka qaarkood waxaa loo adeegsadaa erey kale oo loogu talagalay 'heshiis gudbin' ama 'mustaqbal'. Si gaar ah oo khaas ah oo loogu talagalay la qabsashada oo leh saameyn isku mid ah sida heshiis horay u dhaxeeya bangiga iyo macmiil.
Heerarka horay loo soo qaadey waxaa lagu soo xigtay qodobo gudbin, oo ka dhigan farqiga u dhaxeeya weerarka iyo heerka qiimaha. Si aad u hesho sicirka sare, oo ka soo horjeeda heerka sarrifka dhabta ah, dhibcaha gudbinta ayaa lagu daray, ama laga jaray sicirka sarrifka. Go'aanka kala-jajabinta ama ku darida qodobbada ayaa go'aamiya kala duwanaanta u dhaxaysa dhigaalka dulsaarka ee labadaba lacagaha ku lug leh macaamilka. Lacagta aasaasiga ah ee dulsaarka dulsaarka ah waxaa lagu dhimi karaa dulsaarka dulsaarka dulsaarka hoose ee suuqyada dambe. Dhibcaha weerarka ayaa laga jarayaa qiimaha. Lacagta sicirka dulsaarka dulsaarka hoose waa mid sareeya, dhibcaha weerarka ayaa lagu darayaa qiimaha xajmiga, si loo helo qiimaha sare.
Kuwani waa arimaha dhaqaalaha ee heer gobol ama heer qaran, kuwaas oo loo aqbalo inay aasaasaan aasaaska qiimaha qiimaha lacagta, kuwan waxaa ka mid noqon doona: sicir bararka, koritaanka, dheelitirka ganacsiga, maqnaanshaha dawladda, iyo dulsaarka. Waxyaabahani waxay saameyn ku yeeshaan dad badan oo ka mid ah dhowr ka mid ah shakhsiyaadka xulashada.
Habka loo isticmaalo si loo qiyaaso qiimaha aasaasiga ah ee lacag gaar ah oo ku salaysan warar weyn oo ku saabsan tusmooyinka dhaqaalaha, siyaasadaha dowladeed, iyo dhacdooyinka saameynaya waddanka lacagta.
Tani waa gaabinta isbeddelka ajnabiga, oo maanta loo isticmaalo maalmahan.
FXCC waa magac caalami ah oo la ansixiyey oo lagu maamulay meelo kala duwan, oo ka kooban laba shirkadood: FX Central Clearing Ltd iyo Central Clearing Ltd.
Istaraatiijiyada ganacsiga ee FXCC Demo
FXCC waxay bixisaa barnaamijka ganacsiga demo ganacsi, taas oo ah mid si buuxda u adeegsanaya barnaamijka ganacsiga FXCC ee ganacsiga dhabta ah. Mashruuca demo ganacsi wuxuu u oggol yahay macaamiisha FXCC si ay u bartaan waxqabadka dhabta ah ee waxqabadka ganacsiga iyo qaababka, iyada oo aan halis ugu jirin raasumaal ahaan adoo fulinaya xirfadaha qandaraaska. Moobiilku kuma lug laheeyn heshiisyada ama qandaraasyada dhabta ah, sidaa darteed wax faa'iido leh, ama khasaaro soo noqnoqda iyadoo la isticmaalayo moobilku waa fure. Waa arrin adag oo loogu talagalay ujeedooyinka kaliya.
Diiwaangelinta Khatarta FXCC
Xogta Khatarta FXCC waxay faahfaahinaysaa halista ku jirta marka ay ka hadlayso CFDs iyo in ay ka caawiso macmiilka in ay go'aanno maalgashi ku salaysan ku wargaliyaan.
Waxaa lagu qeexay todobada waddan ee warshadaha ugu waaweyn: USA, Jarmalka, Japan, Faransiiska, Ingiriiska, Kanada iyo Talyaaniga.
Tani waa G7 oo lagu daray: Belgium, Holland iyo Iswidan, koox la xariirta doodaha IMF. Swiserland mararka qaarkood (marmar) ayaa ku lug leh.
U gaaban Pound Great Britain.
Sii dheer Long
Lagu qeexay tallaabooyinka lagu iibsanayo lamaane lacag ah. Tusaale ahaan; haddii macmiilku iibsaday EUR / USD, waxay noqon lahaayeen 'muddo dheer' Euro.
Tani waa talaabada iibinta lamaanaha lacagta. Tusaale ahaan; haddii macmiilka iibiyo EUR / USD, waxay noqon doonaan 'gaaban' Euro.
Tan waxaa lagu qeexay nidaam lacageed oo xadidan, taas oo ay dowladdu ama bangiga dhexe, ay saxdo lacagtooda oo si xor ah loogu beddeli karo dahab sababtoo ah sifooyinka aasaasiga ah. Waxay leedahay adeeg aan lacag ahayn, sidaa daraadeed waxaa laga filayaa in ay hayso heerka ugu hooseeya ee baahida dhabta ah. Waxa kale oo loola jeedaa nidaamyada lacag-bixinta tartiib tartiib tartiib tartiib ah, taas oo dahab, ama rasiidhada bangiyada ee dahabiga ah, u dhaqmaan sida dhexdhexaadinta ugu wayn ee isdhaafsiga.
Good 'til Cancel (Amarka GTC)
Amar lagu iibsado ama lagu iibiyo qiimo joogta ah oo sii socdo si firfircoon ilaa inta laga dhoofinayo ama la joojiyo ganacsadaha.
Waa erey loo adeegsado jargon oo matalaya doolarka Maraykanka.
Product Domestic Gross (GDP)
Lagu qeexay qiimaha guud ee dhammaan alaabooyinka iyo adeegyada lagu soo saaro waddan muddo cayiman.
Waxtarka guud ee qaranka (GNP)
Waa muuqaal dhaqaale oo loo siman yahay GDP, oo lagu daray dakhliga laga helo wax soo saarka, dakhliga, ama macaashka maalgashiga ee laga helo dibedda.
SEE: "Fiican" waa la joojiyay.
Shumaca waxaa lagu gartaa jirdhis oo isku mid ah oo leh duufaan dheer oo dhinaca sare ah.
Gacanka waxaa lagu qeexay sida qeybta oo dhan qaybta qiimaha qiimaha, tirtiridda jajabka. Suuqyada sarrifka sarrifka ah, xitaa waxay xitaa qayb ka tahay qiimaha la soo xiganayo taas oo u muuqda qiimaha dalabka iyo bixinta qiimaha lacagta. Tusaale ahaan; haddii labada lamaane ee lacagta EUR / USD ay dalbanayaan 1.0737 oo waydiisanayaan 1.0740, xadhiggu wuxuu noqonayaa 1.07; Qiimaha ayaa la mid ah labada dalab iyo qiimaha weydiistaba. Xitaa had iyo jeer waxa loo yaqaan "tirooyinka waaweyn" gacan qaadka waxaa inta badan loo adeegsadaa weedh lagu sharaxo heer sare oo caan ah, tusaale ahaan, DJIA oo ku dhow 20,000.
Lacagta adag waxaa sidoo kale loo yaqaanaa lacagta adag oo ah qaabka ugu qiimaha badan ee caalamiga ah. Waxay yihiin lacagaha si ballaaran loo aqoonsan yahay caalamka oo dhan sida noocyada lacag bixinta alaabada iyo adeegyada. Dhibaatooyinka adag waxay guud ahaan ku hayaan xasilooni waqti gaaban oo ay ku jiraan dareeraha suuqyada. Lacago adag ayaa laga soo saaraa waddamada leh deegaan dhaqaale iyo mid siyaasadeed.
Dareenka bangiga dhexe marka ay rabto in kor loo qaado qiimaha dulsaarka, oo laga yaabo in ay ku soo laabato natiijo wanaagsan oo ku saabsan lacagta.
Madaxa iyo Garbaha
Nooc shaxan oo loo adeegsado falanqayn farsamo oo soo jeedinaysa isbedel ku yimid isbeddel, tusaale ahaan, laga bilaabo tartiib tartiib ah oo dib u dhac ku yimid.
Meel Galka ah
Waxay ku lug leedahay qabashada meelo fog iyo mid gaaban oo ka mid ah hantida aasaasiga ah.
Ganacsi Sare (Freight Trading) (HFT)
Tani waa nooc ka mid ah ganacsiga algorithmic oo leh isku dhejin ballaaran oo amarro ah, lagu sameeyey xawaare aad u degdeg ah.
Heer sare / hoose
Sicirka ugu sarreeya ama sicirka ugu jaban ee qalabka asaasiga ah ee maalinta socdaalka ganacsiga.
Tani waa erey loo isticmaalo qeexida ficilka iibiyaha lacagta lamaanaha, markii lagu iibiyo dhinaca suuqa.
Tani waa lacagta loo soo gaabiyo dollar ee Hong Kong (HKD), lacagta Hong Kong. Waxaa loo dhisay calaamado 100, oo inta badan lagu muujiyo calaamadda $, ama HK $. Saddex sirood oo bangiga soo saaray ayaa leh awood u leh inay soo saaraan Hong Kong dollars, oo ku xiran siyaasadda dawladda Hong Kong. HK $ wuxuu u dhexeeyaa sanduuq lacageed oo dowladeed oo haya dollarka Mareykanka.
Marka la eego ganacsiga sarrifka, tan waxaa lagu qeexay sida iibsadaha lamaanaha lacagta.
Tilmaamayaasha suuqyada guryaha
Tusayaasha dhaqdhaqaaqa suuqa dhaqdhaqaaqa ee la xiriira guryaha, badanaa ee USA iyo UK, oo ku saleysan xogta guryaha la daabacay.
Tani waa tirada mashaariicda cusub ee dhismayaasha guryaha (guryaha gaarka loo leeyahay) ee bilaabay wakhti go'an, inta badan ayaa laga soo xigtay bil kasta ama sannadkiiba.
Ichimoku waxaa loo qorsheeyay ka hor dagaalkii labaad ee aduunka, sida suuqyada dhaqaalaha ee suuqyada dhaqaalaha, isbeddel soo socda oo muujinaya tilmaamaha bartamihii sare ee taariikhda iyo hoos u dhaca waqtiyada kala duwan. Ujeedada tilmaamuhu waa inuu abuuro calaamado ganacsi oo la mid ah kii abuuray celcelis ahaan, ama isku-darka MACD. Khadka garaafka Ichimoku ayaa horey loogu sii dhaqaaqay, iyada oo abuuraya taageero ballaaran iyo goobaha iska caabida, waxay suurtogal u tahay in ay yareyso khatarta ka soo goynta.
Sanduuqa Caalamiga ah ee Lacagta Lagu Sameeyay 1946 si loo bixiyo daynta caalamiga ah ee gaaban iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Waa xaddiga ka soo baxa farqiga u dhexeeya heerka qiimaha iyo heerka mustaqbalka ee macaamilka.
Lacagta Lacag la'aanta ah
Sarrifaad sababtoo ah xeerarka sarrifka lacagaha ama caqabadaha jireed looma beddeli karo lacag kale. Lacagaha aan la qoondeeyn karin waxaa laga yaabaa in ay ka mid noqoto ganacsiga, sababtoo ah khalkhalka gaar ahaaneed ee aadka u sarreeya, ama ciqaab siyaasadeed.
Jawaab aan toos ahayn
Qiyaasta aan tooska ahayn waa marka USD ay tahay lacagta asaasiga ah ee lamaanaha iyo maaha lacagta alaabta. Tan iyo USD waa lacagta ugu badan ee suuqyada caalamiga ah sarrifka lacagaha, waxaa badanaa loo isticmaalaa lacagta asaasiga ah iyo lacagaha kale, tusaale ahaan Japanese yen ama doolarka Canadian waxaa loo isticmaalaa sida lacagta lidka ku ah.
Heerka Waxsoosaarka Warshadaha (IPI)
Tilmaamo dhaqaale oo cabbira dhaqdhaqaaqa suuqa. Waxaa soo daabacay Golaha Federaalka ee Dawladda Federaalka ee Bil kasta, waxaana lagu qiyaasayaa soosaarka waxsoosaarka macdanta, wax soo saarka, iyo adeegyada.
Waxaa lagu qeexay kororka qiimaha badeecadaha macaamiisha, si toos ah ula xiriira hoos u dhaca awoodda wax iibsiga.
Shuruudaha Ugu Hooseeya
Tani waxaa lagu qeexayaa sida ugu yaraan dakhliga ugu hooseeya ee lagama maarmaanka u ah, si loo dhiso meel cusub oo furan, halkaasoo marinka hore waa inuu ka yaryahay ama u eg yahay marinka la heli karo. Shardiga ugu horeeya waxaa lagu sheegi karaa boqolkiiba (tusaale ahaan; 1% qaddarka US dollar), ama waxaa lagu xisaabi karaa saamiga kooraha.
Suuqa ganacsiga waxaa lagu qeexaa sida suuqa kala iibsiga ee ganacsatada, ganacsiga FX waxay noqonayaan abuurista suuqa sarrifka lacagaha kale.
Heerarka sarrifka lacagaha ayaa laga soo xigtay bangiyada caalamiga.
Tani waa shirkad aruuris ah oo ku shaqaysa curaarta (ama OTC derivatives), oo u shaqeeya dhexdhexaadiyeyaasha inta u dhaxeysa ganacsatada waaweyn iyo ganacsatada ganacsatada. Tusaale ahaan; xubno ka mid ah London Stock Exchange, kuwaas oo kaliya loo ogol yahay inay wax ka qabtaan kuwa sameeya suuqa, iyada oo aan loo eegin guud ahaan dadweynaha.
Qadarka lacagta lagaa rabo inaad isticmaasho lacag. Heerka dulsaarka ayaa saameyn ku yeelanaya qiimaha ay bixiso FED.
Iyada oo ay sabab u tahay dhacdadan, dulsaarka dulsaarka kala duwan iyo kala duwanaanshaha u dhaxeeya sarrifka hore iyo meeshii sarrifka ee labada gobol waa siman yihiin. Nidaamka dulsaarku wuxuu isku xiraa: sicirka dulsaarka, sicirka sicir bararka iyo sicirka sarrifka lacagta.
Waa ficil dhexe oo saameynaya qiimaha lacagtiisa, iibinta ama iibsashada lacagta ajnabiga ah ee is-beddelashada midkooda hooyo, oo ah iskuday lagu saameynayo sicirka sarrifka.
Waxaa loo kala saaraa mawaadiicda ay maamusho macmiilka FXCC maalintii gudaheeda. Caadi ahaan waxay ku dhajiyaan xadka.
Waxaa loo soo gudbiyey qof ahaan, ama hay'ad sharci ah oo macaamiisha u soo bandhigaysa FXCC, badanaa soo celinta magdhowga marka loo eego khidmadda ganacsiga. Dhiirrigeliyeyaasha waxaa looga hortagayaa inay aqbalaan miisaaniyado qayaxan macaamiishooda.
Waxaa lagu qeexay heshiis ayadoo koox ka mid ah lacagaha ay ku xiran yihiin xiriir go'an oo midba midka kale ah, halkaasoo ay alaabtoodu ay si wadajir ah ula wareegaan lacag kale oo shuruud u ah shuruudaha iyo baahida suuqa suuqa. Baanka dhexe ee ka qaybgalaya heshiiskan waxay sii wadaan inay wadajir u sii wadaan iyagoo iibsanaya isla markaana iibinaya lacagaha kale ee kale.
Tani waa lacagta laga soo gaabiyo Japanese yen (JPY), lacagta Japan. Jabgu wuxuu ka kooban yahay 100 sen, ama 1000. Yen ayaa badanaaba matalaya (calaamad ahaan) xaraf weyn Y, oo leh laba xariiq oo siman oo dhexda dhexe ah.
Lahaanshaha Muhiimka ah
Lagu qeexay lacagtii loo adeegsaday tixraaca macaamilka caalamiga ah iyo marka la dejinayo sicirrada sarrifka. Bangiyada dhexe waxay ku hayaan lacagta aasaasiga ah ee kaydka, dollarkana waxa loo arkaa inay yihiin lacagta ugu muhiimsan adduunka.
Keltner Channel waxaa la sameeyay oo lagu abuuray 1960 by Chester W. Keltner oo lagu soo bandhigay buugiisa "Sida Loo Helo Badeecadaha". Meelaha Keltner waxay qabaan sadex sadar, kuwaas oo ka kooban: celceliska dhaqdhaqaaqa fudud, oo leh qoryaha sare iyo kuwa hoose ee kor ku xusan iyo ka hooseeya celceliska ka guurista. Baaxadda qaybaha (abuurista kanaalka), waxay ku saleysan tahay isbedelka la isticmaalo ee loo adeegsado Qiyaasta True Range. Natiijadan waxaa lagu daraa lagana jaraa dhexda dhexdhexaadinta dhexe.
Slang dakhliga New Zealand.
Ogow Macaamiishaada, tani waa nidaam waafaqsan oo ay raacaan shirkadaha arxan-darrada sida FXCC.
Tilmaamayaasha hoggaanka iyo istaatistikada
Ku dhowaad dhammaan (haddii aaney dhammaaneyn) tilmaamayaasha farsamada, ma hogaaminayaan; ma bixiyaan caddayn in, tusaale ahaan, labada lamaane dhaqdhaqaaqa u dhaqmayaan. Qaar ka mid ah falanqaynta aasaasiga ah ayaa horseedi kara, iyada oo la tixgelinayo inay noqon karto tilmaam horudhac dhacdooyin. Sahan lagu sameeyey macaamiisha iibsashada dabeecadaha mustaqbalka ayaa tilmaamaya caafimaadka qaybta tafaariiqda. Daraasad ku saabsan dhismaha guryaha ayaa laga yaabaa inay caddeeyaan xubnahoodu inay ka go'an tahay inay dhisaan guryo dheeraad ah. Sahanka CBOT wuxuu muujinayaa in ganacsatada ballan-qaadka ah ay sameeyeen inay iibsadaan oo ay ganacsi gaar ah u iibsadaan.
Ku iibinta lacagta la soo xigtay, oo sidoo kale loo yaqaano qiimaha qiimaha dalbashada.
Qiimaha lacagta waddanka, kaas oo sharcigu aqoonsaday sida habka rasmiga ah ee lacag bixinta. Lacagta qaranka waxaa loo tixgeliyaa inay tahay qandaraas oggolaansho ah waddamada intooda badan, waxaana loo isticmaalaa bixinta masuuliyad gaar ah ama dadweyne, iyo sidoo kale inay fuliyaan ballanqaadyada maaliyadeed. Dayn-bixiyuhu waxaa waajib ku ah inuu aqbalo hindisada sharciga ah ee dib u bixinta deynta. Qandaraaska sharciga ah waxaa bixiya hay'ad qaran oo idman, sida Khasnadda Mareykanka ee Maraykanka iyo Bank of England ee UK.
Tani waa koontaroolidda boos weyn oo weyn, iyada oo loo marayo isticmaalka qadar yar oo raasumaal ah.
Masuuliyaddu waa waajibaad ah in la keeno lacag caddaan ah taariikhda la cayimay ee mustaqbalka ee loo yaqaan 'counterparty'.
Lacagta Inter-Bank ee London.
Amarka xaddidan waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhiso ganacsi si uu u galo sicirka qiimaha horay loo qeexay. Marka sicirka sicirka uu gaaro qiimaha hore, amarka ayaa laga yaabaa in la kiciyo (amar xadidan ma xaqiijin karo in amarka la fulin doono) qiimaha xadidan. Waxay dhici kartaa, sababtoo ah isbeddelka suuqa oo suuqyadu ay gaareen qiimaha xaddidan isla markiiba dib uga soo noqoshada heerka qiimaha xaddidan, iyada oo miisaan yar la iibsaday. Ka dib, amarka xaddidan lama saari karo oo socon doona illaa iyo waqtiga la fulin karo ama ilaa macmiilku si ikhtiyaar ah u burin karo amarka.
Tani waa qiimaha uu macmiilku ku qeexayo marka la soo saaray amar xadidan.
Jaantuska sadarka fudud wuxuu ku xiran yahay qiimaha hal mar wakhtiga la doortay.
Tani waa xaaladda suuqa oo ay jirto miisaan ku filan oo miisaan la iibsado, si sahlan loo iibsado, ama u iibiso qalab guud ahaan (ama ku dhow) qiimaha la soo xigtay.
Waxaa lagu qeexay macaamil ganacsi oo khafiif ah, ama xiro meel hore loo qaabeeyey.
Marka koontada macmiilku aysan haysan lacag ku filan oo ay ku qabato mawqifka furan, daadinta ayaa ku dhici doona heer qadar ah oo koontarooli doona boosaska furan ee qiimaha ugu fiican ee la heli karo wakhtiga loo qabtay. Macmiilku wuxuu ka hortagi karaa dejinta koontooyinkooda iyo jagooyinkooda adoo maraya qadar dheeraad ah koontada, ama adoo xiraya booska bannaan ee hadda jira.
Tani waa erey loo isticmaalay qeexidda qadarka mugga ee la heli karo si loo iibsado, ama iibiso waqti dhibban.
Natiijada ka soo baxday shirkii London Gold Pool (Scotia-Mocatta, Deutsche Bank, Barclays Capital, Societe Generale iyo HSBC), qiimaha bilicda ah ee qiimaha madow, sida dahab, lacag, platinum iyo palladium ayaa maalin walba la dhigaa saldhigga 10: 30 (London oo la hagaajiyo) iyo 15: 00 GMT Qiimaha qiimaha barta London waa loo tixgeliyaa in la hagaajiyo marka shirku dhamaado.
Markii uu macmiilku furay boos cusub oo uu ku iibsanayo labo lacag ah, waxaa loo tixgeliyaa inuu 'dheer' raacay.
Qalabka iibsadaha iyo ereyada kala duwan ee lacagta USD iyo CAD.
Qeexaya cutub ahaan loo isticmaalo qiyaasida qiimaha macaamilka. Macaamilada waxaa loo gudbiyaa tirada badan ee la iibsaday, halkii ay ka ahayd qiimaha lacageed. Waa erey ganacsi oo caadi ah oo ku xiran amar ku saabsan qaybta 100,000.
MACD, Dhexdhexaadinta Celceliska Dhexdhexaadinta iyo Furitaanka
Waa calaamad muujinaysa xiriirka ka dhexeeya labada celceliska dhaqdhaqaaqa iyo sida ay u dhexgalaan marka qiimaha isbedelo. Waa isbeddel ku yimid tilmaame xowli ah.
Kani waa darajada ugu hooseysa ee loo baahan yahay, taas oo macmiilku uu haysto FXCC, si uu u furfuro, ama loo sii wado meel bannaan.
Lammaanaha ugu muhiimsani waxa loola jeedaa labada lamaane ee ugu badan suuqa ganacsiga, sida EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF. Labadan lamaane ee lacagaha waaweyni waxay wadaan suuqa saadaasha suuqa caalamka, USD / CAD iyo AUD / USD ayaa sidoo kale loo arkaa inay yihiin kuwo waaweyn, inkastoo labadan lamaane guud ahaan loo yaqaan "labada jinsi".
Waa tirade guud ee wax soo saarka qaybaha wax soosaarka warshadaha soosaarka warshadaha.
Waa erey la isticmaalo marka maamulaha lacaguhu uu ganacsi ujro u leeyahay macaamiisha 'xisaabta' ee habka la midka ah ee loo kiraysto la taliyaha maalgashiga, si loo maareeyo xisaab-maalgalinta, tusaale ahaan, sinnaanta.
Wicitaan Wicitaanku wuxuu dhacaa marka heerarka macaamiishu ay hoos ugu dhacaan 100% sida uu dhigayo FXCC. Macmiilku wuxuu leeyahay ikhtiyaarka ah inuu ku daro lacag dheeraad ah si uu u buuxiyo shuruudaha margin oo looga fogaado Joojinta Jebinta ama wuxuu xiri karaa ganacsiga ugu yar ee faa'iidada leh.
Tan waxaa lagu qeexay qiyaasta wadarta lacagta macmiilka ee ka soo horjeeda mowqifka furan.
Marinka iyo kooraha ayaa isku xiran. Tusaale ahaan, hooseeya naqshadda, sare ujeeda
Waxaa loo baahan yahay in la joogteeyo booska furan iyo kan kale. Mathematically loo soo bandhigay; margin = booska furan / saamiga ugu sarreeya ganacsiga. Tusaale ahaan; USD / CHF 100,000 USD oo ah heerka saamiga ugu sarreeya ganacsiga ee 100: 1, waxay u baahan doontaa in lagu ballanqaaday garabka midig 100,000 / 100 ama $ 1,000. Lacagta loo qoondeeyay lacagta lamaanaha, taas oo USD aysan ahayn lacagta aasaasiga ah (tusaale ahaan lacagta EUR / USD, GBP / USD) iyo gudbinta (EUR / JPY, GBP / JPY), lacagta caddaanka ah ee lacagta lagu soo iibsado waxaa marka hore loo beddelaa USD, iyadoo la isticmaalayo celceliska sicirka sicirka. Tusaale; haddii macmiilku iibsado 1 badan oo ah EUR / USD, marka qiimaha waa 1.0600. Sidaa darteed, 100,000 EUR wuxuu u dhigmaa 100,600 USD. $ 100,600 / 100 luminta saamiga = $ 1,006.00
Ereyga waxaa loo isticmaalaa waqtiga gaarka ah ee maalinta uu xirmayo suuqa, taas oo ah 5 PM EST jimcaha jimcaha oo loogu talagalay barbaariye.
Waxay muujineysaa iibsashada / iibinta amarrada suuqa ee aalad gaar ah.
Guud ahaan waxaa isticmaala qalabka Isticmaalka STP iyo ECN, tani waa habka fulinta marka ganacsade aan la damaanad qaadin in la helo qiimaha lagu arkay shaashadda terminal, laakiin waxaa loo ballan qaadayaa helitaanka ganacsiga. Ma jirto dib-u-xigasho leh noocyadan fulinta.
Qofka suuq-geynta ah waxaa lagu qeexayaa inuu yahay qof, ama shirkad awood u leh inuu abuuro oo uu ku sii wado suuq uu ku dhex leeyahay qalab.
Amarka suuqyada waxaa loo tixgeliyaa amar ah inuu iibsado, ama iibiyo lacagta lacagta la doorto, qiimaha suuqa ee hadda jira. Amarada suuqa ayaa lagu fuliyaa qiimaha lagu soo bandhigay xilligan la joogo qofka isticmaalaya badhanka 'BUY / SELL'.
Waa lacagta labadii lamaane ee labadii isbarbar dhigo taas oo mid waliba lagu beddeli karo mid kale waqtiga dhabta ah.
Waxay qeexaysaa khatarta ka iman karta xoogagga suuqyada, tusaale ahaan, bixinta iyo baahida, taas oo natiijadeedu keento qiimaha maalgashiga isbeddelka.
Tani waa erey loo adeegsaday si ay u muujiso xidhiidhka wadarta guud ee sinaanta, lid ku ah sinnaanta bilaashka ah.
Lagu qeexay taariikhda heshiiska dejinta macaamilka kaas oo horay loo go'aamiyey wakhtigii lagu galay heshiiska.
Heerka Ganacsi Lacageed ee ugu sarreeya
Leverage ayaa lagu muujiyey inay tahay saamiga, oo la heli karo si loo furo boos cusub. Waxay u ogolaataa ganacsatada in ay soo galaan suuqa iyada oo la adeegsanayo macaamiisha qadarka ah ee ka hooseeya deebaajiga ugu horeeya oo keliya ayaa u oggolaanaya. Tusaale ahaan; Xaddiga kabaha ee 100: 1 wuxuu u oggol yahay macmiilka awood u leh inuu xakameeyo $ 100,000 booska badan, oo leh $ 1,000 ee margin ($ 100,000 / 100 = $ 1,000).
Waa qiyaasta qaybta qandaraas ee ugu sarreeya suuqa ganacsiga ee Forex oo la mid ah qaybaha 1,000 ee lacagta aasaasiga ah.
Qodobbada macaamiisha waxay u suurtageliyaan ganacsatada soo jiita inay ku ganacsadaan tiro yar, sidaa daraadeedna waxay yareynayaan khatartooda.
Macaamiisha yaryar, macaamiisha ayaa awood u leh in ay ganacsiyo yaryar u sameeyaan, sidaas awgeed noocyadan xisaabtan ayaa inta badan caan ku ah ganacsatada hurdiga ah halkaas oo ay ka ganacsan karaan xaddi yar.
Noockani noocan oo kale ah wuxuu u saamaxayaa ganacsatada in ay soo galaan suuqa iyaga oo jagooyinka 1 / 10 cabbirka cabbirka heerka.
Waxyaabaha yaryar waxay leeyihiin sicirka lacagta ganacsiga ee 0.10, oo ah qiimaha halbeegga haddii ay saldhig u tahay USD oo u dhiganta $ 1.
Lacagaha Lacagta yar
Labada lamaane lacag yar, ama "kuwa da 'yar" waxay ka kooban yihiin lacago badan oo lacagaha kale ah iyo lacago kala duwan. Tusaale ahaan, waxaan ku kala saari karnaa Euro marka la eego lacagta Ingiriiska (EUR / GBP) oo ah lacag yar oo lacag ah, inkastoo ay si xoog leh u ganacsanayaan iyo faafitaanka si joogto ah u hooseeya. Doolarka New Zealand oo ka soo jeeda US Dollar (NZD / USD) ayaa sidoo kale loo kala saari karaa lacag yar oo lacag yar, inkastoo ay sidoo kale u dhigantaa "laba badeeco".
Waa istaraatijiyad ganacsi oo u ogolaanaya maalgashadayaasha in ay 'macaamilaan ganacsi' ganacsatada kale iyo maalgashadayaasha. Waxay asal ahaan nuqul ka noqon doonaan maalgashadayaasha maalgashadayaasha taas oo ka tarjumi doona xisaabtooda ganacsi.
Bishan Bil kasta. Soo gaabinta loo isticmaalo xisaabinta isbeddelada boqolkiiba ee indices muddada bil kasta.
Ereygan waxaa loo isticmaalaa marka ganacsade uu tixgelinayo jihada gaaban ee dhaqdhaqaaqa qiimaha, ma aha aasaaska. Istaraatiijiyadu waxay ku saleysantahay kaliya socodka.
Keydka Suuqa Money
Qalabka suuqyadu waa hab looga badbaado falalka saliidda lacagaha oo u oggolaanaya shirkad si loo yareeyo khatarta lacagta marka ganacsiga lala sameynayo shirkad ajnabi ah. Ka hor inta aan la sameynin macaamil, qiimaha shirkadda ajnabigaa waa la xirayaa, si loo hubiyo qiimaha macaamilka mustaqbalka iyo in ay hubiso in shirkada guryaha ay lahaan doonto qiimaha ay awood u leedahay oo ay rabto inay bixiso.
Celceliska Dhaqdhaqaaqa (MA)
Lagu qeexay qaabka loo simo sicirka qiimaha / qiimaha qiimaha adoo qaadanaya qiimaha celceliska xogta qiimaha.
Tani waxay dhacdaa marka uu jiro sicir hooseeya suuqa laakiin sicirrada weyn ee sicirka iyo faafitaanka sare. Suuqa guud ee dhuuban waxaa inta badan jira tiro yar oo dalab ah oo dalab ah.
Lagu qeexay danta diidmada ah (SWAP) oo gaabis ah booska habeenka.
Qaababka qaabaynta qaababka, saldhigga madaxa iyo garabka ama ka soo horjeeda.
Kala duwanaansho dulsaarka dulsaarka ah
Tani waa farqiga dulsaarka dulsaarka ah ee ka yimaada wadamada laba lacag oo kala duwan. Tusaale ahaan, haddii ganacsade uu dheer yahay EUR / USD, markaa wuxuu lahaanayaa Euro waxaana uu amaahanayaa lacagta Maraykanka. Haddii qiimaha xiga ee ku xigga Euro waa 3.25% iyo heerka / heerka xiga ee Maraykanka waa 1.75%, markaa kala duwanaanshuhu waa 1.50% (3.25% - 1.75% = 1.50%).
Waxaa lagu qeexay habka lagu dejin karo, taas oo kaliya oo ay ku kala duwan yihiin kala duwanaanta lacagaha la iibsaday oo kaliya ayaa la dejiyaa.
Position of Net
Mawqifka shabakadu waa qiimaha la iibsaday ama aan la iibin oo aan aheyn mid loola macaamilayo boos xuddun siman.
Waxaa lagu qeexayaa inuu yahay deymaha hantidiisa. Waxaa kaloo loo gudbin karaa hantida saafiga ah.
Kulanka New York
Kulanka ganacsiga ee u dhexeeya 8: 00 AM EST '5: 00 PM PM EST. (New York Time).
Laga soo xigtay sida qaab xog ah oo loo isticmaalo mashaariicda ganacsiga si ay u siiyaan dadka isticmaala waxyaabo badan oo casriyaysan.
Meelmarinta Meelmarinta (NDD)
FXCC waa "majiraan macaamil ganacsi" forex broker. NDD waxaa lagu qeexay in aan la xakameynin suuq-geynta ganacsiga, halkaasoo lacagaha ajnabiga ah lagu iibiyo. Bixiyeyaasha loo yaqaan 'Forex Brokers' waxay isticmaalaan amarradan qaabka loo marayo bixiyeyaasha xisaabaadka soodhaweynta, halkii ay ka qaban lahaayeen bixiyaha dakhliga kaliya. Ganacsi ganacsade ah ayaa la siiyaa bixiyeyaash badan, si loo helo dalabkii tartanka ugu badnaa oo la weydiiyo qiimaha.
Waa erey loo isticmaalo in lagu tilmaamo dhaqdhaqaaqa qiimaha oo aan la sharxi karin arrimo asaasiga ah iyo mid farsamo.
Mushaharka Aan ahayn
Macluumaadka tirakoobka ee ay soo aruuriyeen Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha Mareykanka, oo u dhiganta xogta mushaharka inta badan Mareykanka. Laguma darayo: shaqaalaha beeraha, shaqaalaha guryaha gaarka loo leeyahay, ama shaqaalaha ururada aan faa'iido doonka ahayn. Waa astaan ​​asaasi ah oo bil walba la sii daayo.
Qiimeeyn asal ah oo ku saabsan qalabka maaliyadeed waa qiimaha booska ee dollar ahaan.
Waa soo gaabinta Doolarka New Zealand iyo lacagta doolarka Mareykanka. Waxay muujinaysaa ganacsatada lacagta caddaanka ah ee loo baahan yahay laakiin hal doollar oo New Zealand ah. Ganacsiga lacagta NZD / USD ayaa inta badan loo yaqaan "ganacsiga Kiwi".
Amarka OCO (hal hal mar oo ka laabo Amarka kale)
Nidaamka amariga ah ee joojinta iyo xadaynta amarka ayaa la dejiyaa waqti isku mid ah iyo haddii labadaba ganacsi la fuliyo, kan kalena waa la tirtiri doonaa.
Tani waa qiimaha uu ganacsadaha doonayo inuu iibiyo lacag. Dalabka waxaa sidoo kale loo yaqaan qiimaha.
Waa xaalad laga yaabo inay ka dhacdo suuqa qumbaha, taas oo inta badan ku meelgaar ah oo u taagan dhacdada halkaas oo tirada ganacsatada iibinaya qalab ka badan tirada ganacsatada raba inay iibsadaan.
Tani waa ganacsi u adeegta in laga saaro, ama lagu yareeyo qaar, ama khatarta suuqa oo dhan meel bannaan.
Marwo Old Lady ee Threadneedle, waa ereyga bangiga dhexe ee England.
Waa xisaab adoo leh labo brokar oo shakhsiyaadka shakhsi ahaaneed iyo macaamilada lagu soo biiray xisaabta omnibus, halkii si gooni ah loogu talagalay. Ganacsadaha mustaqbalka ayaa koontadan furi doona shirkad kale, halkaas oo lagu fulinayo heshiisyada iyo hawlgalada magaca qofka loo xisaabtamo.
Isbedelka Lacageed Online
Lagu qeexay nidaam online ah oo u ogolaanaya is-weydaarsiga lacagaha quruumaha. Suuqa suuqa waa mid baahsan oo waa shabakad kombuyuutarro oo isku xirta bangiyada, isweydaarsiyada sarrifka lacagaha ah iyo kuwa loo yaqaan 'brokerers' kuwaas oo u oggolaanaya bixinta lacagta lacagaha ganacsiga.
Iskuday inuu gaabiyo suuqa, qiimaha suuqa ee hadda jira.
Wadarta qandaraasyada aan saldhigga lahayn ee ay qabtaan ka qaybgalayaasha suuqa dhammaadka maalin kasta oo ganacsiga.
Waxaa lagu qeexay amar ah in la fulin doono marka suuqa uu guuro oo gaaro qiimaha la sheegay.
Meel kasta oo la furay ganacsade aan la xidhin heshiis isku mid ah ama mid ka soo horjeeda oo ah isla cabbir.
Daaqad FXCC oo muujisa dhammaan mawaa'eelyada macaamiisha ee hadda furan.
Amarro ayaa lagu qeexay sida macmiilka macmiilka ah inuu iibsado ama iibiyo laba lacag oo gaar ah, iyada oo loo marayo macaamiisha ganacsiga FXCC. Amarro ayaa loo qoondeeyn karaa inay sidoo kale kiciyaan, marka sicirka sicirka uu gaaro qiimaha hore ee macmiilka.
OTC Isbeddelka Dibadda
Suuqa sarrifka lacagaha sarrifka ah, oo ka mid ah ka qaybgalayaasha suuqyada, sida FXCC iyo macmiilka, waxay galaan qandaraasyo khaas ah oo gorgortan ah, ama isdhaafsi kale oo toos ah oo midba midka kale ah, taas oo marinka la dhigo laguna ballanqadeeyo mawqif aad u fiican.
Dhacdad marka waddanku leeyahay koboc dhaqaale oo wakhti dheer ah, taas oo dhalisay baahida loo qabo baahida loo qabo sii kordhaya ee aan la taageeri karin awoodda wax soosaaraysa waxay la kulmi kartaa dhaqaalaha kulul, taas oo badanaa ah natiijada kordhinta dulsaarka iyo sicir barar sare.
Waxaa lagu qeexay heshiis maanta laga bilaabo maanta illaa maalintaa ganacsiga xiga.
Naqshad waxay dhacdaa marka qiimaha hantida la mid ah qiimaha hantida kale, tusaale ahaan; haddii hal euro uu u dhigmo hal doolar oo dollar ah. Qodobka "qiimaha qiimaha" waxaa sidoo kale loo isticmaalaa suuqgeynta iyo badeecooyinka, haddii laba hantidu ay siman yihiin. Ganacsatada xawilaadaha ah iyo kuwa maalgashadayaasha ah waxay isticmaali karaan fikradda sicirka qiimaha, si ay u go'aamiyaan marka ay faa'iido u leedahay inay ku beddesho dammaan si ay u yeeshaan saamiyada.
Qashinka waxaa lagu qeexay dhaqdhaqaaqa ugu yar ee qiimaha sarrifka ee uu sameeyay, oo ku saleysan qandaraaska suuqa. Qaar badan oo lamaane lacageed ah ayaa lagu qiimeeyaa afar meelood oo jajab tobanle ah, isbadelka ugu yar waa tan ugu dhibcaha ugu dambeeya. Lammaanaha ugu badan, tani waxay u dhigantaa 1 / 100 ee 1%, ama hal dhibic.
Qiimaha kore kasta ee ganacsi la siiyay, oo loo beddelayo lacagta ganacsadaha.
Qiimaha gaaska = (hal leexasho / sarrifka).
Tan waxaa loo tixgeliyaa amarrada aan saldhiga lahayn ee weli sugaya oo sugaya in la fuliyo, qiimaha ay go'aamiso macmiilka.
Ku soo noqoshada isbeddelka siyaasadda dawladda ee laga yaabo in ay ka soo horjeedaan natiijada ka soo horjeeda mawqifka maalgashiga.
Dhimashada ugu yar ama kororka ugu yar ee dhaqdhaqaaqa qiimaha.
Lagu qeexay ballanqaadyada wadarta guud ee nalka lagu siiyay. Goobta waxay noqon kartaa mid dabaq ah, ama laba jibbaaran (aan wax soo-gaadhin), dheer, (lacag ka badan iibsashada marka loo iibiyo), ama gaaban (lacag badan oo laga iibsado marka loo iibsaday).
Dareenka muuqda (SWAP) ee dareenka ah ee lagu hayo booska oo la furay habeenkii.
Tixraacyo kale oo loogu talagalay labada lamaane ee GBP / USD.
Qiimaha hantida hantida ama lacagta lagaa iibin karo ama iibsan karo.
Qiimaha qiimaha ayaa la sameeyay iyadoo la dhigayo labo xariiq oo siman oo ku yaal jadwalka qalabka la rabo. Iyadoo ku xiran hadba dhaqdhaqaaqa suuqa, channelku wuxuu noqon karaa mid kor u kaca, hoos u dhacaya ama horjoogsanaya. Xadhiyadaha waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro heerarka sarreeya iyo dhererka, halka xariiqa sare ay ka dhigan tahay heerka caabbinta iyo laynka hoose wuxuu u taagan yahay heerka taageerada.
Tani waa socodka xogta suuqyada (waqtiga dhabta ah, ama dib u dhac).
Waxay qiyaaseysaa hadalada suuqyada ah in mid kasta oo ka mid ah kaqeybgalayaasha suuqyada ay si siman u helaan.
Laga soo xigtay dhaqdhaqaaqa joogtada ah ee sicirka ee jihada qaarkood.
Waa qiimaha loo isticmaalo in lagu xisaabiyo heerarka amaahda bangiyada ee Maraykanka.
Soo saare Price Index (PPI)
PPI waxay qiyaastaa isbeddelka qiimaha ee isbeddelka heerarka isdaba-joogga ah ee gawaarida joogtada ah ee raasumaalka, macaamiisha kiro iibka ah ee ay soo saaraan soo saarayaasha, oo waxay u dhaqmaan sidii tilmaame qiimaha tafaariiqeed ee soo socda.
Xiritaanka ama xakameynta booska si loo helo faa'iido.
Iibsiga Maareeyayaasha Index (enshuuranskiisa)
Tilmaamo dhaqaale oo cabbiraya awooda dhaqaale ee waaxda wax soo saarka. Iyadoo la soo ururinayo sahanno bishii. 300 iibsashada madaxda, waxay bixisaa macluumaadka shuruudaha ganacsiga waxayna ku dhaqmaan sidii go'aan qaadashada maamulayaasha.
Waa tilmaame in loo isticmaalo in lagu qeexo joogsiyada raadinta boosaska gaaban iyo kuwa dheer. SAR waa isbeddel nidaamsan ka dib.
Quarter-afar-meelood meel. Soo gaabinta loo isticmaalo xisaabinta isbeddelada boqolkiiba ee isbeddelada kala duwan.
Waa siyaasad lacageed oo ay isticmaalaan Bangiga Dhexe si loo yareeyo dulsaarka dulsaarada iyo kor u qaadista lacagaha iyagoo iibsanaya suuqgeynta suuqa. Hannaankani wuxuu ujeedkiisu yahay in si toos ah loo kordhiyo kharashyada khaaska ah ee dhaqaalaha iyo soo celinta sicir bararka si loo beegsado
Waxay ku xiran tahay dalabka iyo codsashada lacag labadaba.
Ku soo qaad Lacageed
Markay ganacsigeeda ganacsigu noqoto mid lacag ah, qiimaha lacagta ayaa ku dhigan lacagta labaad.
Tusaale ahaan; oo leh EUR / GBP, sigaarka UK waa lacagta lacagaha ah iyo euro waa lacagta aasaasiga ah. Qodobbada tooska ah, lacagta la soo xigtay mar walba waa lacag qalaad. Qoraal toos ah, qiimaha calaamaduhu waa had iyo jeer lacagaha gudaha.
Waa wakhti joogta ah oo koror ah qiimaha hantida.
Range waxaa lagu qeexi karaa faraqa u dhexeeya qiimaha sare iyo qiimaha hooseeya ee lacagta, qandaraaska mustaqbalka ama mawduuca mustaqbalka mudadaas. Sidoo kale waa calaamad muujinaysa qiimaha hantida.
Ganacsiga Range wuxuu tilmaamayaa marka qiimaha uu ku socdo kanaalka oo uu adeegsado falanqayn farsamo, heerka taageerada iyo adkaysiga waa la ogaan karaa, taas oo u ogolaanaysa ganacsade in uu go'aan ka gaadho iibsashada ama iibinta iyo qalabka iyadoo ku xiran haddii qiimaha uu ku dhow yahay hoose channel ama meel sare.
Lagu qeexay qiimaha hal lacagta marka loo eego mid kale, sida caadiga ah ka hor USD.
Tani waa faa'iido iyo khasaaro laga soo saaro jagooyinka xiran.
Dib u dhig
Lagu qeexay in la soo celiyo qayb ka mid ah bixinta asalka ah ee adeegga qaar (tusaale ahaan, lacagta loo yaqaan "Forex commission / rebate rebate").
Dhibaatadu waxay tilmaamaysaa dhacdada marka dhaqaalaha dalka uu yareeyo oo aad hoos u dhacdo hawlaha ganacsiga.
Tani waa suuq la ilaaliyo, sida caadiga ah hay'ad dawladeed oo soo saarta dhowr tilmaam iyo xaddidaad loogu talagalay in lagu ilaaliyo maalgashadayaasha.
Xeerka Awoodda Iibsashada
Marka qiimaha dalalku ay ku kala duwan yihiin isla badeecada isla heerka saamiga isla waqtiga dheer. Sababaha kala duwanaanshaha qiimaha waxaa ka mid noqon kara: canshuurta, kharashaadka dhoofinta iyo kala duwanaanta tayada alaabta.
Heerka Awoodda Xiriirinta (RSI)
Dhaqdhaqaaq xawaare leh, oo ah tilmaame horseedaya. Cabbirta awoodda iyo daciifnimada iyadoo la eegayo qiimaha xiran ee xilliga ganacsiga ee la cayimay.
Bank of Reserve of Australia (RBA)
Bangiga Dhexe ee Australia.
Bangiga Dhexe ee New Zealand (RBNZ)
Bangiga Dhexe ee New Zealand.
Xaaladda suuqa oo dhacda marka maalgashaduhu bilawdo ganacsi qiimo gaar ah, laakiin sarkaalku wuxuu soo celiyaa codsiga iyada oo la soo xigtay. FXCC waxay bixisaa macaamiisheeda iyagoo si toos ah u helaya qariidadda Forex ECN kaas oo dhammaan macaamiisha ay helaan helitaan isku mid ah suuqyada dareeraha ah isla markaana ganacsiyada si dhakhso ah loo toogto, iyada oo aan wax dib loo dhigin ama dib-u-celin.
Badanaa waxaa loo yaqaan "reserves" tan waxaa loo tixgelin karaa: lacag, badeecado, ama raasumaal maaliyadeed oo kale oo ay hayaan mas'uuliyiinta lacagta. Tusaale ahaan; Bangiyada dhexe ayaa laga yaabaa in ay isticmaalaan kaydka si ay u maal-galiyaan: isu-dheelitir la'aanta ganacsiga, xakameynaya saameynta isbadalada FX iyo wax ka qabashada arrimaha kale ee bangiga dhexe uu leeyahay kharashka. Hantida raasumaalka ah ayaa badanaa dareere ah waxayna si toos ah hoos ugu xirtaa xukunka hay'adda.
Sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay lacag amaan ah. Inta badan waxaa lagu qabtaa bangiyada dhexe si loo isticmaalo bixinta ballanqaadka deynta caalamiga ah.
Point of Resistance, ama Heerka
Waxaa loo adeegsadaa falanqaynta farsamada, waana qiimo ama heer ay joojinayso dhaqdhaqaaqa sarrifka sarrifka ajinebiga ah ee sareeya. Haddii heerkulka la jebiyo, markaa waxaa la filayaa in qiimaha qalabka uu sii socon doono sareeya.
Ganacsiga Ganacsi Lacageed - RFED
Xaaladaha marka laga iibsado dukaanka iibka ama iibinta qalabka maaliyadeed ma ku lug yeeshaan isbeddel kasta, shakhsiyaadka ama ururrada waxaa looga baahan yahay in ay u noqdaan kuwo ka soo horjeeda. RFED waxay ku dhaqmaysaa macaamilooyin ku lug leh heshiisyada mustaqbalka, ikhtiyaarrada qandaraasyada mustaqbalka iyo qandaraasyada ikhtiyaarrada leh ee kaqeybgalayaasha kuwaas oo aan u qalmin kaqeybgalayaasha heshiiska.
Maalgashatada Retail & Ganacsiga Suuqa
Marka ganacsade / ganacsade uu iibsado ama iibiyo suuqgeynta, CFDs, lacagaha, sinnaanta, iwm. Koontadiisa shakhsi ahaaneed, isaga / iyada waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay ganacsade tafaariiqle ah / ganacsade.
Heerka Sicirka Sicirka (RPI)
Waa qiyaasta isbedelka qiimaha tafaariiqda iyo adeegyada. Marka lagu daro CPI, RPI sidoo kale waa qiyaasta sicir-bararka ee waddan la siiyey.
Qiyaasta aasaasiga ah ee dhaqaalaha ee isticmaalka iyo tilmaamida xoog dhaqaale.
Kuwani waa sicirka suuqa suuqyada (laga bilaabo waqtigaa) laga isticmaalo suuq geynta qiimaha asaasiga ah si loo go'aamiyo haddii faa'iido ama lumo la xaqiijiyay maalinta. Heerka dib-u-habeynta guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay xiritaanka heerka maal-gashiga hore.
La xiriirka weydiista, ama bixinta qiimaha sarrifka lacagaha qalaad. Tusaale ahaan; on EUR / GBP haddii aan aragno qiimaha 0.86334 - 0.86349, dhinaca midig waa 0.86349. Dhinaca midigta waa dhinaca uu macmiilku iibsanayo.
Waxaa lagu qeexay sida soo noqnoqoshada isbedel aan la hubin, isbedelka soo noqoshada, ama suurtogalnimada in ka yar soo celinta la filayo.
Marka ganacsiga ganacsiga, ganacsatadu waxay u baahan yihiin in ay hubiyaan in aysan halis gelin kharash ka badan lacagtii dareeraha ah ee loogu talagalay ganacsiga. Risqaanka khatarta ah waxaa loola jeedaa qaddarka ganacsadaha uu dareemo raaxo leh maalgelinta marka la isweydiinayo lacag labadaba.
Waxaa loo tixgeliyaa sidii loo falanqeyn lahaa suuqa qumbaha iyo aqoonsiga khasaarihii dhici kara ee laga yaabo inay ku dhacaan maalgashiga, sidaas awgeed waxay adeegsanayaan farsamooyin ganacsi oo laga yaabo in ay yareeyaan khatarta maalgashiga.
Qaadashada khatarta waa erey loo isticmaalo khidmadaha ama kharashyada la bixin karo kuwaas oo loo isticmaalay in lagu magdhabo xisbi si loo qadariyo khatar gaar ah.
Marka jagada la dhigo habeen iyo habeen, dulsaarna wuxuu dhacaa macaamilka laga yaabo inuu bixiyo ama kasbado booska furan, iyadoo ku xiran heerka dulsaarka la xiriira. FXCC waxay ka doodi doontaa ama ku deyn doontaa xisaabta macaamilka iyadoo ku xiran dulsaar lacageed oo u dhexeeya lacagta asaasiga ah iyo lacagta sarrifka iyo jihada booska macaamilka. Tusaale ahaan; haddii macaamilka uu yahay mid lacag badan oo lacag ah sida sicirka habeenkii ee lacagta asaasiga ah uu ka sarreeyo lacagta sicirka, macmiilku wuxuu heli doonaa dhibcaha yar yar ee boosaska la qabto habeenkii. Haddii xaalada ka soo horjeeda, koontada macmiilka ayaa laga soocayaa kala duwanaanshaha dulsaarka dulsaarka. Haddii macmiilku sii dheeraado lacag dheeraad ah, waa inay ka faa'iideystaan ​​inay awoodaan inay maalgashadaan ayna kasbadaan dib u soo noqosho badan habeenkii marka loo eego waxay noqon lahaayeen inay bixiyaan lacagta gaaban ee hooseeysa.
Ku orodka Muujinta
Waxaa lagu qeexay sida ficil ahaan loo ilaaliyo boosaska furan ee furan, iyadoo la rajeynayo helitaanka faa'iidada.
Waqtiyadaha suuqyada suuqyada ama jahwareerka suuqyada, maalgashiga la filayo in lagu hayo ama kordhiyo qiimaha, waxaa loo yaqaan 'Safe Haven'.
Isla Maalinta Isdhaafsiga
Waxaa lagu qeexay sida macaamil ganacsi oo qaangaadhaya maalinta uu macaamilku dhacayo.
Lagu qeexay istaraatijiyad ahaan iyada oo la adeegsanayo isbeddel yar oo qiimo leh Ganacsadaha wuxuu faa'iido u yeelan karaa isla markiiba furitaanka iyo xidhitaanka boosas farabadan oo ka timaadda kulannada ganacsiga.
Tani waxay caddaynaysaa qiimaha ugu hooseeya ee iibinta lacagta aasaasiga ah ee lamaanaha lacagta lagu fulin karo. Waa amar lagu iibiyo sicirka qiimaha ka sarreeya qiimaha hadda.
Joojinta iibinta waa amarro la isku dhigo oo hoos loo dhigo qiimaha xayeysiinta ee hadda jira oo aan lagu dhaqaajin ilaa qiimaha suuqa ee suuqa uu ka socdo, ama ka hooseeyo qiimaha joogsiga. Ku iibso amarrada joogtada ah, markiiba kicin, u noqo amarro suuq ah oo lagu iibiyo qiimaha suuqa ee hadda jira.
Waa iibinta lacag ah oo aan laheyn iibiye.
Tani waa taariikhda amarka la fuliyay ay tahay in lagu xaliyo qalabka, ama lacagaha iyo lacagaha u dhaxeeya iibsadaha iyo iibiyaha.
Waxay tilmaameysaa in booska la furay oo la abuuray lacag lagu iibiyo.
Waxay dhacdaa marka uu jiro isbedel sare suuqa iyo waxa lagu qeexay farqiga u dhexeeya sicirka la filayo iyo qiimaha laga heli karo suuqa oo loo isticmaalay in lagu fuliyo ganacsiga. Maqnaanshaha maaha inay marwalba noqoto mid xun, macaamiisha FXCC waxay la kulmi karaan leexasho wanaagsan, oo sidoo kale loo yaqaan hagaajinta qiimaha.
Jaaliyadda Bangiga Adduunka ee Interconnual Financial (Swift).
Xawaaladaha lacagaha iyo howlaha kale ee maaliyadeed waxaa lagu sameeyaa Swift, maadaama ay tahay isgaadhsiinta isgaarsiinta macluumaadka dhaqaale.
Dhacdada marka ay jiraan iibiyaal ka badan kuwa iibsada, taas oo keenaysa qiimo hooseeya sababtoo ah korodhka bixinta baahida loo qabo.
Maalgashadayaal Sarrifka Dibadda
Marka maalgeliyuhu uu leeyahay khibrad ku filan iyo aqoon ku saabsan sarrifka suuqa sarrifka, isaga / iyada waxaa la filayaa in uu qiimeeyo khatarta fursadaha maalgashi.
Waxaa loo gudbiyaa khatarta marka dawladu aanay awoodin ama aysan rabin in ay la kulanto dib u bixinta deynta.
Ganacsiga, tusaale ahaan, sarrifka ajnabiga ayaa ah mid caqli-gal ah; ma jirto wax damaanad ah in kuwa maalgeliya FX inay faa'iido ka helaan. Macaamiishu waxay lumin karaan dhammaan bakhaarada la dhigo, iyagoo iibsanaya fX ganacsi aad u sareeya. Kala bedelashada sarrifka ajnabiga ah waa inay ahaataa halis kaliya oo loo yaqaan dhaqaale khatar ah, oo lagu qeexay qiyaasta haddii lumay aysan bedelin habka nolol maalmeedka macmiilka, ama qaab nololeedkooda.
Xaaladda suuqa Forex ayaa lagu qeexay dhaqdhaqaaqyo wanaagsan ama mid aan fiicnayn qiimaha qiimaha, taas oo badanaa gaaban.
Suuqyadda suuqyada ayaa dhistay qaabab loogu talagalay qalab maaliyadeed oo si dhaqso ah u ganacsanaya isla markaana amarrada si deg deg ah u degsan, maadaama ay ka qaybgalayaashu suuqa ka soo galayaan aysan helin ama keenin lacagta jireed ee ay ganacsi ku yihiin.
Qiimaha qiimaha / qiimaha
Waa qiimaha qalabka lagu iibin karo ama laga iibsan karo suuqa.
Muuqaal Xalinta Dejinta
Waa nidaam loo qoondeeyey dejinta macaamil ganacsi lacageedka oo ah taariikhda qiimaha taariikhda maalmaha ganacsiga 2 ee laga soo bilaabo Taariikhda Ganacsiga.
Farqiga u dhexeeya qiimaha la siiyay amar degdeg ah (waydiiso qiimaha) iyo iibsi deg deg ah (sicirka iibka) ee lamaanaha lacagta.
Dhibaato dhaqaale ayaa ka jirta waddan ay jirto sicir barar sare oo ay weheliso mushkilad shaqo la'aan, taasoo keentay koboc dhaqaale oo hooseeya iyo sicir barar.
Xaaladda marka aysan jirin jago furan oo iibsadaha iyo iibsadaha macaamiisha ay yihiin dheelitir.
Qiime joogta ah oo ku jira shuruudaha ganacsi ee Forex, waa u dhigma unugyada 100,000 ee lacagta aasaasiga ah ee lamaanaha sarrifka lacagaha. Waxyaabaha caadiga ah waa mid ka mid ah saddexda qadar ee la yaqaan oo badan, labada kale waa: mini-lot iyo wax yar. Waxyaabaha caadiga ah waa qaybaha 100,000 ee lamaanaha lacagta ah, wax yar-yar ayaa matalaya 10,000, wax yar oo ka mid ah qeybaha 1,000 ee lacag kasta. Dhaqdhaqaaqa hal-boodhka ee qiyaasta caadiga ah waxay u dhigantaa isbedel $ 10.
Dulin-celinta waxaa lagu qeexay nooc ka mid ah siyaasadda lacagta, taas oo bangiga dhexe uu xaddidayo saamaynta ku-soo-baxa iyo dibad-baxyada raasumaalka ee bixinta lacagta gudaha. Dhalmada waxaa ka mid ah iibsashada ama iibinta hantida dhaqaale ee bangiga dhexe, saameynta offsetting ee faragelinta lacagaha qalaad. Nidaamka Nadaafadeynta wuxuu qiimeeynayaa qiimaha lacageed ee gudaha ah mid kale, waxaa lagu bilaabay suuqa sarrifka lacagaha qalaad.
Pound British pound, haddii kale loo yaqaan cable ka markii ganacsiga lacagta lacagta GBP / USD.
Stochastic (Stoch) waxay isku dayeysaa in ay caadi u noqoto qiimaha boqolkiiba inta u dhaxeysa 0 iyo 100. Iyada oo xariiqyo stochastic ah, laba khad ayaa la diyaariyey, dhakhso iyo qadadaha stochastic tartiib tartiib ah. Waa calaamad farsamo oo caan ah oo loo isticmaalo ganacsatada si loo yareeyo xoogga isbeddellada.
Jooji Amar Loss
Tani waa amar gooni ah oo macaamilka ah oo ay ku xiran tahay mawqifka haddii qiimaha uu u wareego jihada ka soo horjeeda mowqifka qadar gaar ah oo pips ah. Duruufaha intooda badan joojiya amarro lumis ah sida ugu dhakhsaha badan ee suuqa oo gaadho, ama waxay sii maraan heerka macaamilka ee joogtada ah. Marka la soo saaro, amarka joogsiga ayaa la sugayaa ilaa inta qiimaha joogtada ah la gaarayo. Jooji amarrada waxaa loo isticmaali karaa in la xiro meel (jooji luminta), si loo jebiyo boos, ama furo meel cusub. Isticmaalka ugu badan ee amarro joojinta ayaa ah in la ilaaliyo booska hadda jira (iyada oo la xaddidayo khasaaraha, ama ilaalinta faa'iidooyinka aan la xaqiijin). Markay suuqyadu ku dhuftaan, ama ay soo maraan qiimaha joogtada ah, amarku waa mid firfircoon (kicin) oo FXCC ayaa fulin doona amarka qiimaha soo socda. Jooji amarrada ma damaanad qaadaan fulinta qiimaha joogsiga. Xaaladaha suuqa oo ay ku jiraan isbeddel la'aanta iyo maqnaan la'aanta waxay keeni kartaa amar joogsi ah in la fuliyo qiimo ka duwan amarka.
Jooji Heerka Qiimaha
Tani waxaa lagu qeexay qiimaha uu macmiilku galey qiimo ku kacaya amar goos goos ah.
Shaqo la'aanta dhismo
Markay dhaqaale ahaan jirto shaqo la'aan muddo dheer ah, waxaa loo yaqaan 'Unemployment Unemployment'. Sababta waxaa sabab u ah isbedelka aasaasiga ah ee dhaqaalaha ay sababaan arrimo kala duwan, sida teknoloji, tartan iyo siyaasad dowladeed.
Waxaa loo adeegsadaa falanqayn farsamo si loo muujiyo heerka hanti ahaan halka qiimaha la filayo inuu ku adkaado inuu jebiyo islamarkaana si toos ah isku hagaajiyo.
Kala beddelashada lacagta ayaa ah amaahda amaahda amaahda iyo isla amaahda isla lacagtii la bixiyay ee sicirka sarrifka.
Dhawaaq / Dhawaaq
Marka macmiilka FXCC uu leeyahay P / L oo leh lacag kale oo aan ka ahayn dollarka, P / L waa in loo beddelaa maalinta ugu dambeysa ee ganacsiga ah ee doolarka Maraykanka, qiimaha sarrifka ee wakhtiga la joogo (oo loo yaqaan heerka sarrifka ). Nidaamkan waxaa lagu magacaabaa xaaqitaanka. Ilaa inta P / L la tirtiro, qiimaha xisaabtanka macaamilka ayaa xoogaa hoos u dhacaya (kor iyo hoos), iyadoo ah sicirka sarrifka ee faa'iidada iyo khasaaraha iyo isbeddelka lacagta. Tusaale ahaan; haddii macmiilku faa'iido u leeyahay yen, haddii qiimaha jajabku kor u kaco ka dib markii booska la xiro, laakiin ka hor inta aan faa'iido laga helin doolar, qiimaha xisaabta ayaa isbeddelaya. Isbeddelku wuxuu ku yimaadaa kaliya faa'idada / khasaaraha, sidaas darteed saameyntu waa mid aad u yar.
Bulshada Caalamiga ah ee Isgaarsiinta Bangiga Adduunka ayaa ah shirkad saldhiggeedu yahay Belgian kaas oo bixiya shabakada elektaroonigga ah ee caalamiga ah ee dejinta macaamil ganacsi badiba. Bulshadu sidoo kale waxay masuul ka tahay habeynta nidaamyada lacagta ee loo isticmaalo caddaynta iyo aqoonsiga (ie USD = US Dollars, EUR = Euro, JPY = Japanese Yen)
Tani waa nooc ka mid ah istaraatijiyad ganacsi oo isdabamarinaysa meel bannaan oo ka furan (illaa dhowr maalmood) si looga faa'iideysto isbeddelka qiimaha, oo badanaa loo yaqaan 'sooma'.
Suuqa kala iibsiga ee Swiss Franc, CHF.
Qaado Amarka Profit
Waa amar ay ku xirantahay macaamilka iyada oo qiimaha horay loo qeexay oo markii sicirka suuqa uu gaaro heerka la rabay, amarka ayaa la xirayaa. Marka amarka la fuliyo, waxay keeni doontaa faa'iido u ah ganacsiga la bixiyey.
Falanqaynta farsamadu waxay isticmaashaa isbeddellada qiimaha taariikheed iyo qaababka isku dayga ah in la qiimeeyo jihada qiimaha.
Waxaa lagu qeexay inuu dhacayo qiimaha suuqa sicirka marka uusan jirin sabab asaasi ah oo hoos u dhac ah. Tusaale ahaan waxay noqon laheyd markii qiimaha uu ku soo laabto caabaq adag ka dib markuu si degdeg ah u jabiyo.
Saameynta u dhaxaysa suuqyada dhoofinta iyo soo dejinta dalka ee dalka.
Tilmaamaha farsamada ayaa loo adeegsadaa sidii dadaal lagu saadaaliyo isbeddellada suuqa ee mustaqbalka. Waa qayb muhiim ah ee falanqaynta farsamooyinka loo isticmaalo qaab shaxanka ah waxaana loogu talagalay falanqaynta dhaqdhaqaaqa gaaban ee gaaban.
Waxaa lagu qeexay suuqa maadaama aysan jirin iibiyaal badan iyo iibsadeyaal, taas oo ay sabab u tahay macaamil ganacsi oo hooseeya iyo saamiga guud ee qalabka ganacsiga waa mid hooseeya.
Tan waxaa lagu qeexay sida isbedelka ugu hooseeya ee qiimaha, kor iyo hoos.
Berri dambe (Tom xiga)
Berrito soo socota waxay ku lug leedahay jagooyinka la xiray maalin ganacsi oo qaas ah markii xiritaanka xiritaanka kadibna dib loo furay maalinta xigta. Bixinta waa laba (2) maalmo kadib taariikhda waxqabadka. Waa iibsashada iyo iibinta sarrifka si siman looga hortago wixii dhab ah ee lacagta.
Taariikhda waxqabadka ganacsiga, inta badan lagu sharraxay marxaladda wax-soo-saarka.
Tani waa taariikhda ganacsiga la fulinayo.
Maqnaanshaha ganacsiga wuxuu dhacaa marka waddanku uu ka badan yahay soo dejinta ka badan dhoofinta. Waa tallaabo dhaqaale oo ka dheelitirnaanta dhinaca ganacsiga oo hoosta ka xariiqaya soo saaridda lacagta gudaha ee suuqyada dibadda.
Iibsiga ama iibinta alaab, adeegyo iyo qalabyo dhinacyada kale. Ganacsi lacageedka waxaa lagu qeexi karaa sida la isweydaarsado isbeddelka saamiga lacagta ajnabiga ah.
Miisaska ganacsiga waxaa sidoo kale loo yaqaan 'miisaska'. Waa halka laga gadanayo iibinta iyo iibsiyada iibka, waxaana laga heli karaa bangiyada, shirkadaha maaliyadeed, iwm. Waxay siin kartaa ganacsatada si deg deg ah amaradooda.
Arjiga software oo ah macmiilku wuxuu bixin karaa amar si uu u fuliyo macaamilka macaamilka. FXCC-MT4 (MetaTrader 4) waa tusaale ka mid ah meherad ganacsi.
ka danbeysa Stop
Joojinta joojinta waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo guulaha laga gaaray ganacsi gaar ah iyada oo la sii wado ganacsi furan oo u oggolaanaya sii wadida faa'idada (faa'iidada) illaa inta qiimaha uu ku socdo jihada la rabo. Looma dhicin qadar kaliya laakiin boqolkiiba cayiman.
Tani waa iibsashada, ama iibinta, tusaale ahaan, xaddi lacageed lacageed oo ka timaadda fulinta amar.
Kharashka ku baxa
Tani waa qiimaha iibsashada, ama iibinta qalab lacageed.
Tani waa taariikhda ganacsi dhacdo.
Marka shirkadaha ay ka qaybgalaan ganacsiga caalamiga ah, halista ay wajahayaan waa is-qaadsiinta lacageed, haddii ay dhacdo in sarrifka sarrifka lacagta ahi isbeddelayo ka dib markii ay shirkaddu gashay ballan-qaad dhaqaale.
Jihada suuqa ama qiimaha, badanaa la xidhiidha erayada: "boorish, rujin, ama dariiqyada" (oo kala duwan) oo noqon kara mid gaaban, muddo dheer ama isbeddel degdeg ah.
Tani waa qaab falanqayn farsamo (tilmaame), oo loo yaqaan 'regression line line'. Khadadka isbeddelku waxay u shaqeyn karaan qalab sahlan, oo muujinaya isbeddellada ayadoo la qorsheynayo khadka ugu haboon ee guud: kan ugu hooseeya, kan ugu sarreeya, ama xiritaanka iyo furitaanka qiimaha.
Canshuurtu waxay la mid tahay qeexidda miisaanka waxayna u taagan tahay wadarta qiimaha lacageed ee dhammaan macaamilka la fuliyay muddo cayiman.
Qiimaha Laba Lacagta ah
Waa calaamad muujinaysa dalabyada oo waydii qiimaha suuqa sarrifka.
Goobta aan la ogeyn
Waa erey u furan booska furan.
Marka sicirka sarrifka ah ee sicirku ka hooseeyo xajmiga awoodda wax iibsiga, waxaa loo tixgelinayaa in la qiimeeyo.
Qiyaasta boqolkiiba ee xoogga shaqaalaha hadda ka baxsan shaqada.
Maqnaanshaha P / L
Waa erey ah faa'iidada waqtiga dhabta ah ama lumitaanka la siiyay heerka sicirkan. Tusaale ahaan, haddii macaamilka uu go'aansado inuu galo qadar lacag ah oo khaas ah, isaga / iyadu waxay u baahan doontaa inay iibiso qiimaha dalbashada iyo P / L oo aan fiicnayn joogteyn illaa inta booska la xiro. Marka la xiro, P / L waxaa lagu dari doonaa ama laga jarayaa qaddarka kaaga baxaya deebaajiga, si loo helo lacagta caddaanka ah ee lacagta caddaanka ah.
Tani waa qiimaha cusub ee qiimaha ah ee ku jira sicirka sare ka hor imtixaanka hore.
Heerka Boqortooyada Mareykanka
Dakhliga dulsaarka ee bangiyadaha Mareykanka loo isticmaalo in lagu wareejiyo macaamiishooda ama ganacsade ganacsade ah.
Tani waa qandaraaska sharciga ah ee Maraykanku, oo metelaya USD marka la sameynayo macaamil ganacsi lacageed.
USDX, Index USD
Heerka dollarka (USDX) wuxuu qiyaasayaa qiimaha doolarka Mareykanka iyo qiimaha saxda ah ee lacagta lagu iibiyo lamaanayaasha ganacsiga ee muhiimka ah ee USA. Waqtigan xaadirka ah, qiimahan waxaa lagu xisaabiyaa qiimeeynta sarrifka lacagta lixda adduunka ee waawayn: euro, jun Japanese ah, doolarka Canadianka, pounds British, kronaan iswiidhish iyo francis-ka Swiss. Euro waa miisaanka ugu badan ee ka soo horjeedka doolarka, taas oo ka dhigan 58% qiimaha miisaaman, oo soo raaca jaantuska leh circa 14%. Tirakoobku wuxuu ku bilowday 1973 oo saldhig u ah 100, qiimaha tan iyo markaas waxay ku xiran tahay saldhigan.
Waa qaab lagu tilmaamayo falanqeeyayaasha farsamada, halkaas oo lagu eegayo calaamad muujinaysa isbeddel dhacdo.
Waa taariikhda isbeddelka lacag-bixinta ee udhaxeeya ganacsiyada dhaqaalaha. Taariikhda qaan-gaadhka ah ee macaamilada lacageed lacageed waa caadi ahaan laba (2) maalmo ganacsi laga bilaabo marka booska la furo.
VIX waa calaamad sax ah oo loo yaqaan 'CBOE Volatility Index', oo ah cabbir caan ah oo muujinaysa isbedelka tilmaamaya fursadaha isweydaarsiga SPX; VIX waxaa lagu xisaabiyaa Guddiga Kala-duwanaanta Guddiga Chicago (CBOE). Haddii akhriska VIX uu sareeyo markaas maalgashadayaasha iyo ganacsatada waxay caado ahaan aaminsan yihiin in khatarta ganacsiga uu sare u kacayo; in suuqyada ugu weyn ee suuqyada laga yaabo inay noqdaan mudada kala guurka. VIX wuxuu naga siiyaa 30 maalmood oo miisaankeedu yahay miisaanka sannadlaha ah ee SPX. Tusaale ahaan, akhrinta 20% waxay filan doontaa 20% dhaqaaqa, kor iyo hoosba, inta lagu jiro laba iyo tobanka bilood ee soo socda.
Lagu qeexay qiyaasta qiimaha qiimaha, taas oo lagu cabbiri karo iyada oo la adeegsanayo isbeddel caadi ah ama kala duwanaansho u dhexeeya soo celinta qalabka isku midka ah.
Xisaabinta qadarka guud ee dhaqdhaqaaqa ganacsiga gaar ahaan: sinnaanta, labada lamaane, badeecada, ama muujinta. Mararka qaarkood waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa sida wadarta qandaraaska qandaraaska lagu iibiyo inta lagu jiro maalinta.
Waxaa lagu qeexay "server-ka gaarka ah ee khaaska ah". Isticmaal la galiyo adeeg bixiye fog, kaas oo u ogolaanaya ganacsatada inay qaadaan kuna shaqeeyaan EA-yada fog, iyaga oo awood u siinaya in ay ganacsi 24 / 5 ku yareeyaan latency yare, iyaga oo aan u baahnayn in kombuyuutarkooda gaarka ah loo beddelo. Adeegga FXCC waxaa bixiya BeeksFX.
Waraaqaha Wareegga Wareega
Tilmaamahan wuxuu muujinayaa dib-u-eegista isbeddelka, oo hadda lagu sameeyay gudahiisa. Xirxiradu waxay la mid yihiin qaabka saddexagalka ah, oo leh taageerooyin iyo khadadka iska caabin ah. Tilmaame-tusahan qaab-dhismeedkani waa qaab-deg ah muddo dheer taas oo muujinaysa sicirka qiimaha jaban.
Waxaa lagu qeexay xaalad ah suuq aad u kacsan, kaas oo dhaqdhaqaaq qiimo jaban uu markaa si dhakhso ah u raaco dib u dhac fiiqan.
Waxay u taagan tahay dhacdada marka lacagta lagu amaahdo tiro badan oo ka mid ah hay'adaha maaliyadeed iyo bangiyada, halkii ay ka dhigan lahaayeen qadar yar oo ka timaadda maalgashado yaryar.
Heerka Qiimaha Isgaadhsiinta
Waa qiimaha soodhawrka wakiilada alaabooyinka iscaawinta iyo cabbiraadda isbeddelka qiimaha ee qaybta waxsoosaarka iyo qaybinta ee dhaqaalaha. Badanaa waxay keenaysaa qiimaha macaamilka ee 60 maalmaha 90. Qiimaha cuntada iyo warshadaha waxaa inta badan lagu taxay qiyaas ahaan.
Maalin bangiyada xarumaha maaliyadeed ee lacagaha u furan ganacsi, tusaale ahaan, fasax bangiga ee Maraykanka, sida Thanksgiving maalin, waxay la macno tahay inaanay ahayn maalin shaqo oo ah USD kasta oo lagu soo xigtay.
Waa hay'ad maaliyadeed oo caalami ah oo ka kooban xubno ka mid ah IMF kuwaasoo gacan ka helaya horumarinta dawladaha xubinta ka ah bixinta amaahda hantida gaarka loo leeyahay.
Waxaa loo yaqaanaa bixiyaha ganacsiga ama iibiyaha booska lacagta.
Wakhti kooban oo la isticmaalo oo loo isticmaalo biilal bil walba.
Waxaa lagu qeexay sida soo laabashada maalgashiga raasumaalka.
Waa khad oo muujinaya dulsaarka dulsaarada meel gaar ah wakhtiga ay alaabtu leedahay tayada deynta ee la midka ah, laakiin taariikhda gaaban ama ka weyn. Waxaa loo isticmaalaa in lagu siiyo fikrad ah dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha la filayo mustaqbalka, iyo sidoo kale saamiga dulsaarka isbeddelo.
Sannad-Sanad. Soo gaabinta loo isticmaalo xisaabinta isbeddelada boqolkiiba ee isbeddelada sanadka / sanadlaha.